NEWS COLLECTION: November 2015
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အခြေခံ စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ ဈေးတက်နေ
ဖားကန့် မြေပြိုမှုတွင် သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဆွမ်းသွတ်ကူညီ
ဖားကန့်မြို့နယ် အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှ စွန်ပစ်မြေစာပုံပြို ကျမှုအတွင်း သေဆုံးသူများအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုအနေဖြင့် တစ်သုံးလုံး ကုမ္ပဏီမှ နိုဝင် ဘာလ(၂၇)ရက် နေ့တွင် ရက် လည်ဆွမ်းသွပ် အခမ်းအနား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လုံးခင်း နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
"အလောင်း ရှာတာတွေတော့ ရပ်လိုက်ပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအရ သေဆုံးသွားသူ တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ မနက်ဖြန်တော့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီက ရက်လည် ဆွမ်းသွတ်ပေးမယ်လို့ သတင်းရပါတယ်"ဟု လုံးခင်းရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်မိုးလွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ မြေစာပုံပြိုကျမှုမှာ နိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့ နံနက် (၃)နာရီဝန်းကျင်က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး (၂၁) ရက်နေ့တွင်(၇၉)လောင်း၊(၂၂)ရက်နေ့တွင် (၂၆)လောင်း၊ (၂၃)ရက်နေ့တွင်( ၈) လောင်း၊ (၂၄)ရက်နေ့ တွင် (၂)လောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
သေဆုံးသူ အလောင်းရှာဖွေရေးကို ဒေသခံအာဏာပိုင်များနှင့် အဆိုပါ နယ်မြေရှိ စကခ(၇) လက်အောက်ခံ တပ်သားများ၊ ကျောက်စိမ်းတူး ဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဒေသခံများက ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
"အလောင်းကတော့ (၁၁၅)လောင်း တွေ့တယ်ပေါ့နော်။ ကျန်တဲ့ ခြေတွေ လက်တွေပဲ တွေ့တာတို့ကတော့ ထည့်မတွက်ဘူးပေါ့။ မနက်ဖန်ကို ရက်လည် ဆွမ်းသွပ်တရားနာမယ်။ ပရိတ်တွေဘာတွေ ရွတ်မယ်လို့တော့ ကြားတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်က လုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ မဏ္ဍပ်တွေ ဘာတွေဆောက်နေပြီလို့တော့ကြားတာပဲ"ဟု ဖားကန့်ဒေသခံ ဦးရွှေသိန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ စွန့်ပစ်မြေစာတွေကို လျမ်ရှန်းေ(တစ်သုံးလုံး) ကုမ္ပဏီက လာရောက်ပုံသွားခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းကုမ္ပ ဏီမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးခင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၂/၂၀၁၅ဖြင့် စိစစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အပေါ်နားလည်မှုရှိလာစေဖို့ ပညာပေးဆွေးနွေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံအား ညစ်ညမ်းပုံအဖြစ်ပြင်ဆင်ကာ Facebook လူမှုကွန်ရက်၌ တင်သည့်အတွက် တရားစွဲခံရသော်လည်း အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်နေသော ဧရာဝတီတိုင်း ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်မှ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ နယ်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းထွန်း ကို ယမန်နေ့က ပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ်ရဲစခန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရခြင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက် အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးမြတ်ဟိန်းက ဦးသန်းထွန်း အား အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုသင့်သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ ဦးသန်းထွန်းကို မနေ့က နေ့လည်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မှာ ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်ကို ပို့ဆောင်ပြီး ချုပ် နှောင်ထားပါတယ်။ သူ့အမှုကိုလည်း တရားရုံးကို တင်ပို့ထားပြီးပါပြီ”ဟု ကန်ကြီးထောင့်မြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ရဲလွင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ က ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ကြံခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းထွန်းသည် Thu Thu အမည်ရှိ Facebook အကောင့်ဖြင့် အဝတ်အစားမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မျက်နှာကို ဖြတ်ညှပ် ကပ်လုပ်ကာ ညစ်ညမ်းစွာ ရေးသားထားသော အီလက်ထရောနစ် ဒီဇိုင်းတခုကို လူမှုကွန်ရက်တွင် ဖြန့်ချိလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထုိုသို့ ပြုလုပ်သည့်အတွက် ၎င်းအား Hand to Hand အခမဲ့ပညာ ဒါနကွန်ရက်မှ ကိုစည်သူအောင်က တရားလိုပြုလုပ်၍ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုရာ ကန်ကြီးထောင့်မြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ဦးရဲလွင်ကိုယ်တိုင် အမှုစစ်အဖြစ် တာဝန်ယူ လက်ခံခဲ့ပြီး ဦးသန်းထွန်းအား ပြစ်မှုနံပါတ် ၁၅၇/၂၀၁၅၊ အီလက် ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့သည်။
သိုသော် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့၌ ရမန်ကုန်ဆုံးသော်လည်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးမြတ်ဟိန်းထံမှ မှတ်ချက်မရသည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဦးသန်းထွန်းကို အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကြံခိုင်ရေးပါတီ နယ်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းထွန်း၏ အမှုကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၂ရက်နေ့တွင် ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) မှာ နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီလက်ထက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦး အား ခြောက်လှန့် တောင်းယူခြင်း၊ အနိုင့်အထက်ပြုခြင်း၊ မတရားတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက် ခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် လူမှုကွန်ရက် Facebook အသုံးပြုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြား ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားစွဲခံရ သူမှာ ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့မှ မချောစန္ဒီထွန်း (ခ) ချစ်သမီးဖြစ်ပြီး တပ်မတော်၏ အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည့် စစ်ဝတ်စုံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အ၀တ်အစား အရောင်နှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုသည့် အတွက် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အဖမ်းခံရသူမှာ ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ်နေ ဦးပက်ထရစ်ခွန်ဂျာလီဖြစ်ပြီး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သရော်ထားသည့် ဓာတ်ပုံအား လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေမျှခဲ့သည်ဆိုကာ ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် မချောစန္ဒီထွန်း (ခ) ချစ်သမီးနှင့် ဦးပက်ထရစ်ခွန်ဂျာလီ တို့ နှစ်ဦးစလုံးမှာ လက်ရှိအချိန်တွင် အာမခံရရှိခြင်းမရှိပဲ ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်။
ယခု တတိယမြောက် ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရမည့် ဧရာဝတီတိုင်း ကန်ကြီး ထောင့်မြို့နယ်မှ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ နယ်ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းထွန်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားလို ကိုစည်သူအောင်က “ချစ်သမီးတို့ ဦးခွန်ဂျာလီတို့တုန်းကတော့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက ချက်ခြင်း မှတ်ချက်ချပေးခဲ့ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဦးသန်းထွန်းအတွက်ကျတော့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်က အင်မတန် နောက်ကျတယ်လို့ ပြောချင်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
NLD အစိုးရသစ် ကို ဂျပန်အစိုးရက အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးမယ်
မြန်မာ့တိုက်ပွဲများအရေး နိုင်ငံတကာ လက်မနှေးရန် ရှမ်းထူထု အခြေပြု အဖွဲ့များ တောင်းဆို
ရှမ်းပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ နှုတ်ဆိတ်မနေကြရန် ရှမ်းလူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများက ဘန်ကောက်မြို့ စာနယ်ဇင်းကလပ်(FCCT)တွင် နိုဝင်ဘလ ၂၆ ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်ပွဲ ပြုလုပ်၍ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်မှ ယနေ့ထိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်(SSPP/SSA)နှင့် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲအတွင်း အစိုးရစစ်တပ်မှ ဝေဟင်မှ တိုက် လေယာဉ်များ အသုံးပြုခြင်း၊ အမြောက်လက်နက်ကြီးများဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခြင်းဟု ရှမ်းလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စိုင်းခေးဆိုင်က ပြောသည်။
“နိုင်ငံတကာက ဒီအတိုင်း လစ်လျူရှုထားတော့မှာလား၊ ရန်ကုန်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေ အခုချိန်ထိ တခုခုမ လုပ်သေး တာလဲ၊ ကူညီမှုတွေ ဘာကြောင့် မလုပ်သေးတာလဲ”ဟု သူက မေးခွန်း ထုတ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်မှ ယခုထိ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSPP/SSA) တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲကြောင်း အရပ်သား ၅၀ ကျော် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
“စစ်ဖြစ်လို့ ထိခိုက်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ လူမှုရေး စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို နစ်နာသူတွေ ပြန်ပြီး ထောက်ပံ့မှုတွေ အစိုးရကနေ လုပ်ပေးဖို့၊ ပြန်လည် လျော်ကြေးပေးဖို့ ပြည်သူလုထုကို ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့အတွက်ပါ ကျနော်တို့ ပြောဆိုတယ်”ဟု သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများ အားလုံး အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချုိးဖောက်မှုများနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရှိပြီး တရားမျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စိုင်းခွန်းမိုင်က ပြောသည်။
“တိုက်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးဖို့၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ စစ်ပြေးတွေအတွက် ဒေသခံတွေဘဲ ကူညီတာတော့ရှိတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဘဲ ကူညီတာရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာကနေ ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ သိမြင်လာပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်”ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် လက်ရှိ ကျေးသီး၊ မိုင်းရှူး၊ မိုင်းနောင်မြို့နယ်များမှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀,၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရပြီး ဒေသတွင်း အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့်သာ မှီခိုနေရပြီး ရန်ကုန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အေဂျင်စီများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု အနည်းငယ်သာ ရရှိသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းက SSPP/SSA သည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော်လည်း တစ်နိုင်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး မပါဝင်သဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ယင်းနောက်ပိုင်း အစိုးရစစ်တပ်မှ ထိုးစစ်ဆင်လာသဖြင့် တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ နှင့် ၂၄ ရက်များတွင် အစိုးရ နှင့် SSPP/SSA နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်များ လက်ရှိ တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၅ ရက်အတွင်း စစ်ရှိန်လျော့ရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ အခြေအနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား၍ ၁၀ တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ကျောက်ဖြူရဲစခန်းမှ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၀ နာရီခန့်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့၊ ကားကြီးကွင်း၊ မဟာဘုံကထိန် အထိမ်း အမှတ် စတိတ်ရှိုးပွဲတွင် စကားများကြရာမှ ရှစ်တန်းကျောင်းသား မောင်ကျော်လင်းထွန်း(ခ)မောင်ချေ (၁၅)နှစ်မှ ဓါးဖြင့် ထိုးသဖြင့် ဆယ်တန်းကျောင်းသား မောင်မင်းသန့်စိုး (၁၆) နှစ် သေဆုံးသွားကြောင်း နယ်ထိန်း ခေါင်းဆောင် ရဲအုပ်ရဲထွန်း က နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“မောင်မင်းသန့်စိုးက သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားများပြီး ရန်ဖြစ်တာကို ကူညီတာလို့ သိရတယ်။ ရန်ဖြစ်ပြီး ခဏ နေတဲ့ အခါမှာ မောင်ကျော်လင်းထွန်း ဓားနဲ့ လာထိုးပါတယ်။ ညာဘက်နို့အုံကို ၀င်သွားပါတယ်။ ဆေးရုံကို ချက်ချင်းပို့ပေမယ့် ဆေးရုံ ရောက်တာနဲ့ သေဆုံးသွားတယ်။ တရားခံကိုတော့ ဒီနေ့ နံနက် ၅ နာရီမှာ ဖမ်းမိထားပါပြီ ” ဟု ရဲအုပ် ရဲထွန်းက ပြောသည်။
ဓါးဖြင့်ထိုးသူ ရှစ်တန်းကျောင်းသား မောင်ကျော်လင်းထွန်း(ခ)မောင်ချေမှာ ကျောက်ဖြူမြို့၊ အရာရှိ ရပ်ကွက်မှ ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားသူ ဆယ်တန်းကျောင်းသား မောင်မင်းသန့်စိုးမှာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ မလကျွန်း ကျေးရွာမှ(အရာရှိရပ်ကွက်)တွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရာရှိရပ်ကွက်မှ ဒေါ်ဖြူဖြူသန်း မှ တရားလိုလုပ်ကာ ရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းထားပြီး ကျောက်ဖြူမြို့မရဲစခန်းမှ လူသတ်မှု (ပ)၂၇၅/၂၀၁၅- ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ရဲအုပ်ရဲထွန်းက ပြောသည်။
၎င်းအမှုကို ကျောက်ဖြူ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး မိုးဇော်သူ က စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရသည်။
ဓားထိုးသူ ရှစ် တန်းကျောင်းသားနှင့် သေဆုံးသူ ဆယ်တန်းကျောင်းသားတို့မှာ အထက(၁) ကျောက်ဖြူတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေကြသော ကျောင်းသားများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တန်ဆောင်တိုင် လွိုင်ကထုံ မီးမျှောပွဲတော် ၂ နိုင်ငံပြည်သူတွေ ပူးတွဲ ဆင်နွှဲ
တိုင်းပြည်အတွက် ကျရာကဏ္ဍက ကူညီမယ်လို့ ဖိုးလပြည့်ပြော
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့် ခေါ် ကိုနေရွှေသွေးအောင်တို့ တွေ့ဆုံမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အပေါ်တွင် နွေးနွေးစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်ဟုဆိုကာ တိုင်းပြည်အတွက် ကူညီမည်ဟု ဖိုးလပြည့်က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော် ထပ်ပြီးဝေ့လည်ကြောင်ပတ် မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ အန်တီ ကျွန်တော့်ကို တွေ့တုန်းက နွေးထွေးရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အပေါ်လည်း အများကြီး ဝမ်းသာမိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အကျိုး အတွက် ကျရာကဏ္ဍကလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။ ပြည်သူများလည်းဒီသတင်းကြောင့် ဝမ်းသာ လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဖိုးလပြည့်က သူ၏ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ်စ် စာမျက်နှာတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် နေ့လည်ပိုင်းက ရေးသားသည်။ သူ၏ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ဆိုထားခဲ့သည်။
ဖိုးလပြည့် ခေါ် ကိုနေရွှေသွေးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ (မြန်မာပိုင်း) သို့ အတည်ပြုပြောခဲ့ပြီး “ဟုတ်ပါတယ်”ဟု အဖြေပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တွေ့ခဲ့သည် မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ပြောဆိုခဲ့သည်ကိုမူ ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီးနောက် နိုင်ငံတကာမှ ဂုဏ်ယူကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်လည်း အမေရိကန်လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အားလုံးကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ဝမ်းသာကြတာပေါ့၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားတော့မယ်ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီကို လိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးက လိုလားကြပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့် ခေါ် ကိုနေရွှေသွေးအောင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည့် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ညတွင် ကိုနေရွှေသွေးအောင်က သူ၏ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့ဘုတ်စ်တွင် “ဒီနေ့ည သမိုင်တွင်မယ့် ညတစ်ည” ဟု ရေးသားထားခဲ့သည်။
ပြည်သူချစ်သော လူထုဒေါ်အမာ နှင့် အနုပညာသည်များ သရုပ်ဖော်အစီအစဉ် ကျင်းပ
မြန်မာသည် မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်မှု တတိယအမြင့်ဆုံး ဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံသည် တကမ္ဘာလုံးတွင် လူသတ်မိုင်းများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု တတိယ အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိပြီး ကရင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးများသည် မြေမြှုပ်မိုင်းပျံ့နှံ့မှု အများဆုံး ဒေသများတွင် ပါဝင်ကြောင်း မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း နိုင်ငံတကာစည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့ (ICBL) ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသည် ICBL ၏ နှစ်စဉ် ထုတ်ဝေနေကျဖြစ်သော ၂၀၁၅ ခုနှစ် တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။
တကမ္ဘာလုံးတွင် လူသတ်မိုင်းများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အမြင်ဆုံး နံပါတ် ၁ နေရာတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ နံပါတ် ၂ နေရာတွင် ကိုလံဘီယာ၊ နံပါတ် ၃ နေရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ နံပါတ် ၄ နေရာတွင် ပါကစ္စတန်နှင့် နံပါတ် ၅ နေရာတွင် ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဖြစ်ကြောင်း မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ထပ်ဆင့်ပေါက်ကွဲစေသော လက်နက်ပစ္စည်းများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (LCM) မှ Research Coordinator & Editor ယက်စ်ဟူဟွာ မိုဆာ-ပူအန်စူဝမ်က ပြောသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအပြင် ပဲခူး၊ တနင်္သာရီစသည့် တိုင်း ဒေသကြီးများရှိ မြို့နယ်အနည်းဆုံး ၅၆ မြို့နယ်တွင် လူသတ်မိုင်းပြန့်နှံ့မှုကို ခံစားနေရသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လူသားချင်းစာနာသော မိုင်းရှင်းလင်းရေး အစီအစဉ်များ မရှိသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ မိုင်းရှင်းလင်းရေးကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၀န်းကျင်တွင် ရပ်တန့်လိုက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် တချို့မြေမြှုပ်မိုင်း တည်နေရာများမှာ တာဝန်ယူမြှုပ်ခဲ့သည့် အရာရှိများ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းတည်နေရာ မြေပုံကိုင်သည့်အရာရှိများ သေဆုံးသွားသည့်အခါ ယင်းရောကို ကျန်သူများက မသိနိုင်သောကြောင့် ဆက်လက်မဖော်နိုင်တော့ဘဲ “အန္တရာယ်ရှိနေရာ၊ မသွားရ” ဟူ၍ ဆိုင်းဘုတ် ထောင်လိုက်ရသည်များ ရှိကြောင်း ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA) ၏ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောထွန်းထွန်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“တချို့မြေမြှုပ်မိုင်းတွေဟာ နှစ်ကာလ ကြာမြင့်လာလို့ ပြန်လည် တူးဖော်တဲ့အခါ အဓိက ပေါက်ကွဲမယ့်နေရာသာ ကျန်ရှိပြီး ဘေးဘက်တွေမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် ပြန်လည် တူးဖော်ရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိတယ်” ဟု ယင်းက ရှင်းပြသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အသုံးပြုသည့် မိုင်းများမှာ လက်လုပ်မိုင်းနှင့် စက်မိုင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး လက်လုပ်မိုင်းမှာ ဓါတ်ခဲဖြင့် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ၆ လ၀န်းကျင်ခန့်သာ သက်တမ်း သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ စက်မိုင်းများမှာ ကာလ အကန့်အသတ်မရှိ ပေါက်ကွဲမှု ပြင်းအားများကြောင်း သိရသည်။
မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကုန်အထိ လူသတ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုပေါင်း ၃၇၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း တပ်မတော်၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများထံမှလည်း တိကျသည့်စာရင်းဇယား မရရှိမှုကြောင့် လက်တွေ့ ကိန်းဂဏန်း၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်သာဖြစ်ကြောင်း ယင်းက ရှင်းပြသည်။
ယက်စ်ဟူဟွာ မိုဆာ-ပူအန်စူဝမ်က “ဒါအကုန်ပဲလို့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ထူးခြားမှုတခုက တပ်မတော်ရော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းရော နှစ်ဘက်စလုံးက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ ပြည်သူပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ စာရင်းဇယား ထားရှိခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ၃၇၀၀ ဟာ ကျနော်တို့ တဦးချင်းရေထားတဲ့စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် ဂဏန်းကတော့ ကျနော်တို့ ရေထားတဲ့ ဂဏန်းထက် အများကြီးများနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မြင့်မားသော်လည်း ထိခိုက်မှု အများဆုံးဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် မိုင်းအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ ပညာပေးမှုလုပ်ငန်းများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး မြေမြှုပ်မိုင်းထိခိုက်ရာမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများအတွက် ဆေးဝါးအထောက်အပံ့နှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ တိုးတက်လာသော်လည်း မလုံလောက်မှုများ ကြုံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ICBL ကို ကမ္ဘာအ၀ှမ်း လူသတ်မိုင်းများ ရှင်းလင်းပပျောက်ရေးအတွက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ICBL ၌ နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ရှိ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၁၃၀၀ ကျော်ပါဝင်ကြောင်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်အထိ ကမ္ဘာ့အစိုးရ စုစုပေါင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၂ နိုင်ငံက မြေမြှုပ်မိုင်း အသုံးပြုမှု တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း သဘောတူစာချုပ်ကို သဘောတူ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်းစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးရန်လည်း ယက်စ်ဟူဟွာ မိုဆာ-ပူအန်စူဝမ်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ရှမ်း စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် သရုပ်ပြမှုတခု ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက် ပြုလုပ်
ကချင် ၀န်ကြီးချုပ် လမ်းကြောင်းတွင် ဗုံးကွဲ တစ်ဦးသေဆုံး၊ သုံးဦး ဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း၏ ဖားကန့်ခရီးစဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးလမ်းကြောင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သေဆုံး၊ ဒါဏ်ရာရသူများရှိသော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့မှာ စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ မြစ်ကြီးနား ပြန်ရောက်ပြီဟု ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဦးနောင်တိန်က မဇ္ဈိမသို့ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် မနက်ပိုင်း မြစ်ကြီးနားမှ ဖားကန့်သို့ မြေစာပုံပြိုကျ၍ သေဆုံးသူများနှင့် မိသားစုများအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီရန်နှင့် လူထုတွေ့ဆုံရန် သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်း နန့်ယားကျေးရွာတွင် လုံခြုံရေးယူနေသော တပ်မတော်သားတစ်ဦး ချိတ်ဆွဲထားသော ဗုံး မတော်တဆ ပေါက်ကွဲခဲ့ကာ တစ်ဦးသေဆုံး၊ သုံးဦး ဒါဏ်ရာရရှိသည်ဟု ကနဦးသတင်းရရှိ ကြောင်း ဆိုသည်။
''ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ညနေပိုင်းဖားကန့်က ပြန်လာတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာ ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ် ခရီးစဉ်က အသွားရော အပြန်ပါ ချောချောမွေ့မွေ့ပါဘဲ၊ အခု စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ မြစ်ကြီးနား ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့အတူ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ မွေးရေ၀န်ကြီး၊ သစ်တောနဲ့ သတ္တုဝန်ကြီးပါတယ်။ အားလုံး ချောချောမောမော ပြန်ရောက်ပါတယ်''ဟု ဦးနောင်တိန်က ပြောသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မီးသတ်မြို့နယ်မှူး ဦးကျော်ဝင်းဆွေက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တစ်ဦး သေဆုံးပြီး၊ လေးဦး ဒါဏ်ရာရရှိကာ အားလုံးမှာ လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေး ယူနေသည့် တပ်မတော်သားများ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
နန့်ယား၌ ဗုံးပေါက်သည့်နေ့တွင် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့မှာ ဖားကန့်မြို့၌ လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ လုံးခင်း ဈေးသစ်အားကြည့်ရှုခြင်း၊ လုံးခင်းကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ လုံးခင်းနှင့် လယ်ပြင် တံတားသစ် တည်ဆောက်မှုအား ကြည့်ရှုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားသို့ ထွက်ခွာသွားသည်ဟု ခရီးစဉ်တလျှောက် လိုက်ပါခဲ့သည့် ဦးကျော်ဝင်းဆွေက ပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်(၁) ၌ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ပြန်လည် အရွေးခံထားရသူဖြစ်သည်။
ယခုဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲ အပေါ် မြင်းခြံ မြို့သူမြို့သားများ ပြောစကား
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ အခမ်းအနား အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်၌ KWO ကျင်းပ
အမျိုးသမီးများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရန် (၁၆)ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက် နေ့တွင် ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ် စပ်ရှိ အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီ၊ ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး-KWO တို့က အဆိုပါအခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အုန်းဖျန်စခန်း၏ KWO ဥက္ကဋ္ဌ နော်ဘောညောက ယခုလို ရှင်းပြသည်။
“အဓိကကတော့ စခန်းတွင်း အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီကနေ ဝေမျှလိုက်တဲ့ အသိပညာတွေကနေတဆင့် အချင်းချင်း ပြန်လည်ဝေငှပြီးတော့ သိရှိမယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်စေမယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။
လူပရိဿတ် ၂၀၀နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ၎င်းအခမ်းအနားကို နံနက် ၉နာရီခွဲမှ ၁၁နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ကြပြီး စခန်းဥက္ကဋ္ဌ နှင့် တာဝန်ရှိသူများအပြင် စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ စခန်းအ တွင်းရှိ KWO တာဝန်ရှိသူများက အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယင်းသို့ အခမ်းအနားများ ကျင်းပပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေး ယူလာနိုင်ခြင်းများကြောင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများမှာ ယခင်နှစ်များထက်စာလျှင် လျော့နည်းလာသည် ကို တွေ့ရကြောင်း စခန်းရှိ KWO တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။
ထိုစခန်းရှိ ကရင်အမျိုးသမီး လူမှုရေးရာ တာဝန်ခံ နော်တာမလာခူက “အရင် ၂၀၁၂နဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွေတုန်းက အိမ်တွင်းအ ကြမ်းဖက်မှု အရမ်းများတယ်။ အသိပညာပေးတာ၊ အရေးယူနိုင်တာတွေကြောင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု သိသိသာသာ လျော့ နည်းသွားတဲ့အပြင် ဥပမာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေဆို ထိုင်းဥပဒေအတိုင်း သွားတဲ့အတွက် အခု ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ၄မှုလောက်ပဲ တွေ့ရ တော့တယ်”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကျင်းပလာခဲ့ သည်မှာ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး KWO အနေဖြင့် လူထုဟောပြောပွဲများဖြင့် အသိပညာပေးခြင်း၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ပြု လုပ်ခြင်း စသည့်လှုပ်ရှားများကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့ကို ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော (၅၄)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၏ (၈၃)ကြိမ်မြောက် မျက် နှာစုံညီအစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၅၃/၁၃၄ အရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးသန်းရွှေ မြေးနဲ့ တွေ့ဆုံမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတည်ပြု
တပ်ချုပ်၏ ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်နှင့် တပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် အပါအ၀င် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ရွေးကောက် တင်မြှောက်မှုများမှ တဆင့် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး နယ်ပယ်တွင် အပြောင်းအလဲ များ ရှိလာတော့မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မြို့နယ်နှင့် လူဦးရေကို အခြေခံဖွဲ့စည်းသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေ ၄၄၀ တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့် အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ၁၁၀ ဦးထက် မပိုသော တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၀၉ (ခ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
အလားတူ ကိုယ်ပိုင်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း (သို့) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တခုစီမှ ကိုယ်စားလှယ် တဦးစီ ပါဝင်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေများ အပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်တခုစီ အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦးကျ တူညီစွာဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦးနှင့် အတူ တပ်ချုပ်က ဥပဒေနှင့် အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး ပါဝင်ရမည် ဟု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၁ (ခ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထို့အတူ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၁၆၁ (ဃ) တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းရာ၌ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံ တပုံနှင့် ညီမျှသော တပ်ချုပ်က ဥပဒေနှင့် အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး ပါဝင်စေရမည် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း၏ လေးပုံတပုံသည် ဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ဦးရေကို တပ်ချုပ်က တပ်မတော်သားများဖြင့် လိုအပ်သလို ဖြည့်စွက် တာဝန်ပေးနိုင်သည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၇၆ (ဈ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၇၆ (ဃ) (၂) တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသဦးစီးအဖွဲ့၏ လုံခြုံရေးရာ တာာဝန်နှင့် နယ်စပ်ရေးရာ တာဝန်ကို တပ်ချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်ကသာ တာဝန်ယူရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါရှိသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ တပ်ချုပ်က လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခန့်အပ်ခွင့် ရယူထား သော အရေအတွက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ လေးပုံတပုံမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယေဘုယျ သိထားကြသော်လည်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆင့်တွင် သုံးပုံတပုံအထိ တပ်ချုပ်က အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခန့်အပ်ခွင့် ရှိကြောင်း ဂဃနဏသိသူ နည်းမည်ဟု စာရေးသူ ယူဆပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်အဆင့်တွင် တပ်ချုပ်က အဘယ်ကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံတပုံ ရယူထားပါသနည်း ဟူသော မေးခွန်းနှင့် အဖြေကို ပညာရှိ စာဖတ်သူများ စဉ်းစားအဖြေရှာရန် လိုပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ တပ်ချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ စာပိုဒ်ကို သရုပ်ခွဲ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ စာရေးသူ ဉာဏ်မီသမျှ တွေ့ရှိချက်အား အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြလိုပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် “နိုင်ငံတော်သမ္မတ” ဟူသော အမည်နာမ ဝေါဟာရကို အကြိမ်ပေါင်း ၂၉၀ ထက်မနည်း အများဆုံး သုံးနှုန်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း နောက်တွင် ဒုတိယအများဆုံး ဖော်ပြခံရသည့် ဝေါဟာရမှာ “တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်” အမည်နာမ ဖြစ်၍ အကြိမ် ၅၀ ထက်မနည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ အပါအ၀င် နိုင်ငံအကြီးအမှူး စာရင်းဝင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ၀န်ထမ်းအဖွဲ့ အကြီးအမှူးများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒု ၀န်ကြီးများ၊ ရှေ့နေချုပ်၊ ဒု ရှေ့နေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ဒု စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် သက်တမ်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ နုတ်ထွက်ခြင်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်း၊ စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အတိအကျ ပြဋ္ဌာန်းပါရှိ ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံ့တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူတို့၏ ဖြစ်ပုံ၊ တည်ပုံ၊ ပျက်ပုံကို ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သော တပ်မတော်သားနှင့် ပြည်သူ့ရဲတို့၏ ၀န်ထမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သဘာဝ ထူးခြားမှု အရ ၎င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စအ၀၀ကို သီးခြားဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၉၁၊ ၂၉၂ တွင် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။ တပ်ချုပ်၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပုံ၊ ရပ်စဲပုံ သဘောသဘာဝကို သာမန် တပ်မတော်သား လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် သဘောသဘာဝ တန်းတူထား၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင် တိတိကျကျ မဖော်ပြဘဲ ချန်လှပ်ထားဟန်ရှိပါသည်။
သို့သော် တပ်ချုပ်သည် သာမန်တပ်မတော်သား တာဝန်သာမက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပေးအပ်သော ထူးခြား၍ အတိုင်းအဆမရှိ ကြီးမားသော တာဝန်ကြီးကို လွှဲအပ်ခံရသည့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ မဟာလူသားတဦး ဖြစ်နေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးက သတိပြု အကဲခတ်နေရသည့် ထူးခြားပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ အားလုံး၏ လေးပုံတပုံ အရည်အတွက်ကို တပ်ချုပ် တာဝန်ရှိသူ တဦးတည်း က ထူးထူးခြားခြား ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသည် ဖြစ်ရာ လက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် သြဇာတန်ခိုး ယှဉ်နိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်ပါ သည်။
အဆိုပါ တန်ခိုးသြဇာမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အရပင် မည်သည့်အခြေအနေ အချိန်အခါတွင် ယင်း တန်းခိုးသြဇာ တည်မြဲ၍ မည်သည့် အခြေအနေ အချိန်အခါတွင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ် လက်ဝယ်ရှိ တန်းခိုးသြဇာများ ချုပ်ငြိမ်းရမည်ကို အတိအကျ ပြဋ္ဌာန်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းအချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် အသိပေးပြဋ္ဌာန်း ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲစဉ်က ထာဝရတည်မြဲသော ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံတော်ကြီးဟု ယူဆရေးဆွဲခဲ့ဖြင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှု ပျက်ယွင်းသော အခါ ဥပဒေနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့် အာဏာလွှဲပြောင်းရန် ပြဋ္ဌာန်းချက် မရှိသည် ကို အကြောင်းပြုပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲသောအခါ တပ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစားပေး အလေးထားလွန်းရာ ရောက်သည့်၊ မမျှတရာရောက်သည့် သဘာဝလွန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ယခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တွင် ပါရှိနေသည်ကို တပ်မတော်သားများ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတိပြုသင့်ပါသည်။
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခဲ့သူများ ကဲ့သို့ပင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲသူများ သည်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသာ ထာဝစဉ် အာဏာရယူထားမည့် အနေအထားဖြင့် ဤဥပဒေကို ရေးဆွဲထားခဲ့ပုံ ရပါသည်။ အကယ်၍သာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အာဏာ မရခဲ့လျှင် အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာကို စာရေးသူတို့ ရင်ဆိုင်ရ တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အရ တပ်ချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အချိန်မရွေး ဖြုတ်နိုင်၊ အချိန်မရွေး အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခန့်အပ်နိုင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ လေးပုံတပုံ အရေအတွက်ရှိ ယနေ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်များသည် တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုသည့် တပ်မတော် အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် ကာချုပ် တဦးတည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်လား ဆိုသော အချက်ကို ယနေ့ ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခွဲခြားခြား မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ပဋိညာဉ်ဥပဒေ၊ အခန်း (၁၀) ပုဒ်မ-၁၈၂ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အကြီးအကဲ စကားရပ်များ အနက် အဓိပ္ပာယ်ပိုင်းခြား ဖော်ပြချက် (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ထုတ် စာ-၁၃၅) တွင် “ကိုယ်စားလှယ်” နှင့် “အကြီးအကဲ” စကားရပ်များအနက် အဓိပ္ပာယ်ပိုင်းခြား ဖော်ပြချက် – ၁၈၂။ “ကိုယ်စားလှယ်” ဆိုသည်မှာ သူတစ်ထူး အတွက်နှင့် မည်သည့် အမှုကို မဆို ဆောင်ရွက်စေရန် ခိုင်းစေခြင်းခံရသူကို လည်းကောင်း၊ အခြားသူတို့နှင့် အမှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သူတစ်ထူး အတွက် ကိုယ်စားပြု လုပ်သူကို လည်းကောင်း “ကိုယ်စားလှယ်” ဟု ဆိုလိုသည်။ သည်ကဲ့သို့ အမှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်စေရန် ခိုင်းစေသူကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် ပြုလုပ်စေသူကို လည်းကောင်း၊ “အကြီးအကဲ” ဟု ခေါ်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ “ကိုယ်စားလှယ်” နှင့် “အကြီးအကဲ” အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ယနေ့ လွှတ်တော်သို့ စစ်တပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်ခံ၍ တက်ရောက်စေရန်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရာမှ ရပ်စဲ၍ တပ်မတော်သို့ ပြန်လာ အမှုထမ်းစေရန် မည်သူက အမိန့်အာဏာဖြင့် စေခိုင်းနေသလဲ ဆိုသော အချက်ကို ဆန်းစစ်လျှင် တပ်ချုပ်သည် အကြီးအကဲ ဖြစ်၍ ၎င်း၏ အမိန့်ဖြင့် လွှတ်တော် တက်နေသူများမှာ တပ်ချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင် တပ်ချုပ်တဦးတည်းက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော လွှတ်တော်အမတ် အရေအတွက်ကို ရယူရုံမက၊ မိမိ တပ်မတော်သားနှင့် မိသားစုဝင်များကိုလည်း သီးခြား မဲထည့် ရွေးချယ်သည့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ရယူစေသည်။ တပ်မတော်နယ်မြေများ အတွင်း အခြားပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်စေသည်။ လက်ရှိ စစ်တပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အငြိမ်းစား ယူခါနီး ဗိုလ်ချုပ်များကိုလည်း အငြိမ်းစားယူစေပြီး တပ်သြဇာ မကင်းသော နယ်မြေတွင် အရပ်သားအမတ် အဖြစ် အရွေးခံစေသည့် လုပ်ရပ်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်း စာသားဖြစ်သော “တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ တို့ပြည် … တို့မြေ၊ များလူခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ အခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊ တို့ပြည် …တို့မြေ …” ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်နှင့် ညီ မညီ တပ်မတော်သား ပြည်သူများ အနေဖြင့် ဆင်ခြင်စဉ်းစားသင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေထဲက အာဏာများစွာကို ရယူထားသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ ဖြည် တည် ပျက် (သို့မဟုတ်) ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းရန် လစ်ဟာနေခြင်း ပင်လျှင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပျက်ယွင်းရန် လမ်းပေါက်ဖြစ်စေသည်ကို ယင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲခဲ့သူများ သိရှိပုံ မရပါ။
တပ်ချုပ် နာမပညတ်ပိုင်ရှင် ရုပ်နာမ်အစုသည် ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင် သဘောအရ ထိုပညတ်ပိုင်ရှင်၏ ရုပ်သည် မျက်တောင် တခတ်၊ လျှပ်တပြက်ခန့် အတွင်း ကုဋေ ၅၈၀၀ ကျော်၊ စိတ်သည် ကုဋေ တသိန်းကျော် ဖြစ် တည် ပျက် နေကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆိုအမိန့်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် လက်ခံဆင်ခြင်တတ်ရန် လိုပါသည်။
အဆိုပါ ပညတ်ပိုင်ရှင် အကြီးအကဲသည် တရားသဘောအရ ရုတ်တရက် ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်း ကင်းပျောက်သွားခဲ့လျှင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သော ပထမဆုံး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကဲ့သို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ရုတ်တရက် အသိအာရုံချို့ယွင်း ပြောင်းလွဲသွားခဲ့လျှင် မျက်မှောက်ဥပဒေ သဘောတရားအရ အကြီးအကဲ ခန့်အပ်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် လည်း တရားဝင် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် မရှိ၊ လွှဲအပ်ထားသော တာဝန်မှ ရပ်စဲရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပဋိညာဉ်ဥပဒေ အခန်း ၁၀၊ ပုဒ်မ-၂၀၁၊ အကြီးအကဲနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
ယင်းသို့ လွှတ်တော် အဆင့်ဆင့်တွင် တပ်ချုပ်အမည်စာရင်းပေး ခန့်အပ်ထားသော တပ်ချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ် လေးပုံတပုံသည် လွှတ်တော် အတွင်းမှ ရုတ်တရက် ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သွားမည် ဆိုလျှင် မူလလွှတ်တော်၏ တည်ငြိမ်မှုကိုပါ ထိပါးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တည်ငြိမ်မှုကို လိုလားသော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ဥပဒေနှင့် အညီ အာဏာလွှဲအပ်သည့် အစီအစဉ်များ အသင့်ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ကြပါသည်။ မြန်မာတို့၏ ၁၅ နှစ်ကြာ အချိန်ယူ ရေးဆွဲခဲ့သည် ဆိုသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ယင်းသို့ မရှိပါ။
သို့ပါ၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အများပြည်သူဆန္ဒနှင့် အညီ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ရန် သုိ့မဟုတ် အသစ် ရေးဆွဲရန် တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူတရပ်လုံး အာရုံပြုနှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နေကြပါဟု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုပါက အနာဂတ်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရင်းမြစ်များတွင် ယခုတင်ပြခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှ အကြိမ် ၅၀ ထက်မနည်း ရည်ညွှန်းဖော်ပြခံရသော ဖွင့်ဆိုချက်သည် အဓိကအကြောင်းတရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါကြောင်း မေတ္တာ ရှေ့ထား တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဖားကန့် မြေပြိုမှု လူရာကျော် သေဆုံးခဲ့ပေမယ့် ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေမှု ဆက်လုပ်ကိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ အားနည်းချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တက်လာမည့် အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း (MATA) က ပြောဆိုလိုက်သည်။MATA အဖွဲ့အစည်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအပေါ် ဆွေးနွေး သုံးသပ်ချက်များကို နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
MATA ၏ မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သည့် တောင်ကြီးအခြေစိုက် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး အမှုဆောင်အဖွဲ့ (IDEA) ၏ တည်ထောင်သူ ဦးဇော်ထွန်းက နောက်တက်လာမည့် အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအရ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းဥပဒေ၏ အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဦးဇော်ထွန်းက “ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာပဲပြောပြော၊ နောက်ဖွဲ့လာမယ့် အစိုးရသည် ဘာပဲပြောပြော လူထုက ရွေးလွှတ်လိုက်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် ပုံစံကို အများဆုံး သွားနိုင်မယ့် အစိုးရလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ရော ဒေသလူထုတွေ အတွက်ပါ ဒီအချိန်လေးသည် အချိန်ကောင်းပဲပေါ့နော်။ နောင်ဆိုတာ မသေချာဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယင်းဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အခွင့်အရေးများကိုပင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားခြင်း မရှိကြောင်းလည်း ဦးဇော်ထွန်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
“သန့်ရှင်းတဲ့မြေ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ရေ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားခွင့်ရှိဖို့က လူသားတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ဒီအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အတွက်ကိုတောင် ဒီဥပဒေမှာ မတွေ့နေဘူး” ဟု ဦးဇော်ထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စိမ်းလန်းအမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသင်း EcoDev ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမျိုးသူက နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပြီး ခေတ်နှင့် လျော်ညီမှု မရှိကြောင်း၊ ယေဘုယျ သဘောဆန်ပြီး အားနည်းချက်များစွာ ရှိနေကြောင်း ပြောသည်။
“နိုင်ငံသား တယောက်ချင်းစီရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို တိတိကျကျ ဖော်ပြမထားဘူး။ အဲဒီအခွင့်အရေးကို ဘယ်လို ကာကွယ်မယ် ဆိုတာကိုလည်း တိတိကျကျ ရှင်းလင်း ရေးသားထားတာ မရှိတဲ့အတွက် အဲဒါက အခြေခံ အားနည်းချက်ပေါ့” ဟု ဦးဝင်းမျိုးသူက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ရှိသည်ကိုပင် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူအများစုမှာ သိရှိခြင်း မရှိသည့်အတွက် MATA က ဦးဆောင်ပြီး တရားဥပဒေ မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အထက်ပါ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဒေသများတွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ သဘာဝ သယံဇာတ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူမှုနှင့် သယံဇာတ တူးဖော်သည့် စက်ရုံများ၏ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးပြီး ရေ၊ မြေ၊ လေ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများကို တွေ့ရှိရကြောင်း MATA အဖွဲ့က ဆိုထားသည်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပညာရှင် တဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ကျော်ထွန်းက လက်ရှိပြဌာန်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသည် ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် စီမံကိန်းတည်ရှိရာ ဒေသများတွင် ပဋိပက္ခနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဦးအောင်ကျော်ထွန်းက “အခုလက်ရှိ ဥပဒေသစ်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကို ရယူပိုင်ခွင့် မရှိတာတို့ပေါ့။ စီမံကိန်းတခု ဝင်လာမယ်၊ အဲဒီစီမံကိန်းဟာ ဘယ်အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အဲဒီဟာတွေကို ဥပဒေသစ်မှာ ရှိထားတဲ့ အချက်တွေ မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်စီမံကိန်းဆိုတာကို မသိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပဋိပက္ခတွေက အဲဒီအပေါ်တွေ အခြေခံပြီးတော့ ဖြစ်လာတာ” ဟု ပြောသည်။
ဥပဒေပါ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များသည်လည်း ထိရောက်ပြီး ဖြစ်သင့်သည့် အတိုင်းအတာများ မဟုတ်ကြောင်း၊ နောက်တက်လာမည့် အစိုးရသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကရင်ကျောင်းသား ၂ ဦးကို မတရားသင်းပုဒ်မဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
NLD အစိုးရအဖွဲ့မှာ အာဏာပြမည့် ဝန်ကြီးများ မပါဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်ပါတီများကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပြီး အစိုးရဖွဲ့ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရအဖွဲ့တွင် အာဏာပြမည့် သူများကို ဝန်ကြီးနေရာ မပေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်သည်။
“အာဏာပြချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ NLD က ဘယ်တော့မှ ဝန်ကြီးနေရာ ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစတည်းက သေသေချာချာ ပြောထားတာပါ။ ရာထူး ခန့်အပ်မှာ မဟုတ်ဘူး နေရာပေးမှာ မဟုတ်ဘူး တာဝန်ပဲပေးမှာ တာဝန်ကို မယူတတ်လို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုကို မလေးစားလို့ရှိရင် NLD အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။ လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ (မြန်မာပိုင်း) နှင့် မေးမြန်းမှုတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
NLD အစိုးရတွင် NLD ပါတီဝင်မဟုတ်သည့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် တတ်သိပညာရှင်များလည်း ပါဝင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
“ဖွဲ့မယ့် အစိုးရထဲမှာ NLD မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါမယ် တခြား နိုင်ငံကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့် လူတွေလည်း ပါနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့သေးသည်။
အလားတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရွေးကောက်ခံအမတ်များသည် ခေါင်းဆောင်များ မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုမည့်သူများသာ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်သည်။ “ခေါင်းဆောင်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ပြည်သူလူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ အဲ့ဒီလို စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ခေါင်းဆောင်တွေလို့ သွားမပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီလို စိတ်ဓာတ်တွေ လုံးဝ အားမပေးချင်ဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့သည်။
NLD အစိုးရ တက်လာပါက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို အခြေခံလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး “နိုင်လို့ အားလုံးယူမယ် ဆိုပြီးတော့ မလုပ်ဘူး။ နိုင်လို့ မျှပြီးတော့ အားလုံးနဲ့အတူ ပူးပေါင်း လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ လုပ်မယ်။ NLD ကတော့ ဦးဆောင်မှာပေါ့” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍မူ “ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လိုမှ မကောင်းနိုင်ဘူး။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲက ပြီးတာမှ ဘာမှ မကြာသေးဘူး ငြိမ်းချမ်းရေးက ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။ အဓိက ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို အရမ်း ဒုက္ခပေးပါတယ်” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ချင်းမိုင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး မကြာခင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်မည်
တိုင်းရင်းသား ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေဟု ဆို
တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် အစိုးရ တပ်မတော်သားများက အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်လက် ကျူးလွန်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်များသည် အကြမ်းဖက်မှုများကို နည်းပေါင်းစုံဖြင့် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ တွေ့ကြုံနေရကြောင်း၊ စစ်တပ်က အမျိုးသမီးများကို လင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ပိုမိုများပြားလာခြင်းသည် စစ်တပ်အာဏာ စိုးမိုးနေခြင်း သာ မက စစ်ဝါဒကျင့်သုံးနေမှုနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေသည်ဟုလည်း အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)က ယနေ့တွင် ကျရောက် သည့် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်ရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးသား ထားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသတချို့၌ အစိုးရတပ်က ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ ဘဝ လုံခြုံရေးအတွက် ပို၍စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်း၊ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များသည် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီး အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့နေရကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများလည်း မရရှိကြကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
“စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာ၊ စစ်ဖြစ်တဲ့ ဒေသမှာဆိုရင် စစ်တပ်ကနေ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းပြုကျင့်တာ တွေ့နေရတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာ တွေမှာဆိုရင် တိုင်ကြားချင်ရင် တိုင်ကြားဖို့နေရာ မရှိဘူး။ အပြစ်ပေး အရေးယူမှုက ပေါ့တိပေါ့ဆနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အင် မတန် မှ ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းနေတယ်”ဟု အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ) မှ မွန်းနေလီက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကျူးလွန်သူများကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ လုံလောက်သော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ရှိစေရန် အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်းလည်း အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ထောက်ပြထားသည်။
မကြာမီ တက်လာမည့် အစိုးသစ်၏ ဥပဒေ စိုးမိုရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး၊ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး၊ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး စသည့် ရည်မှန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုအား စစ်လက်နက်သဖွယ် ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမှုကို ရပ်တန့်ရေး အလေးထား စဉ်းစားရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“အခုတက်လာမယ့် အစိုးရသစ်က အမျိုးသမီးဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးပြီး အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ ကိစ္စက ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လောက်အထိ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုတာကို နားလည်ပေးပြီး လက်တွေ့ကျကျ အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု မွန်းနေလီက ဆိုသည်။
၁၉၉၉ ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပသော ၅၄ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ၏ ၈၃ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာ စုံညီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၅၃/၁၃၄ အရ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်ကို “နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်း ဖက်မှု ပပျောက်ရေးနေ့” အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နဲ့ NLD ပါတီ အပြန်အလှန် တရားစွဲဆိုနေ
ဖိုးလပြည့်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတည်ပြု
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့် ခေါ် ကိုနေရွှေသွေးအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အတည်ပြုပြောသည်။
လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ (မြန်မာပိုင်း) အစီအစဉ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုအတွင်း နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် နံနက်က ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ၏ မေးမြန်းမှုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ၏ မိသားစုဝင်ဟု သုံးနှုန်းမေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ဟုတ်ပါတယ်”ဟု အဖြေပေးခဲ့သည်။
သို့သော် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တွေ့ခဲ့သည် မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ပြောဆိုခဲ့သည်ကိုမူ ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရာတွင်လည်း ပြောဆို ငြိနှိုင်းရန်များရှိနေပြီး “အခုတည်းက ငြိပြီးတော့ လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်မလို့ တွေ့သင့်လူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ဆိုတာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကိစ္စအဝဝတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေး အပါအဝင်အတွက် အများကြီး ကောင်းတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီးနောက် နိုင်ငံတကာမှ ဂုဏ်ယူကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်လည်း အမေရိကန်လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အားလုံးကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ဝမ်းသာကြတာပေါ့၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားတော့မယ်ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီကို လိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးက လိုလားကြပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့် ခေါ် ကိုနေရွှေသွေးအောင်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည့် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ညတွင် ကိုနေရွှေသွေးအောင်က သူ၏ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့ဘုတ်စ်တွင် “ဒီနေ့ည သမိုင်တွင်မယ့် ညတစ်ည” ဟု ရေးသားထားခဲ့သည်။
လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပနေ
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အမျိုးသမီး အမတ်လောင်း ၈၀၀ ခန့်အနက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ ၁၅၀ ခန့် အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ လာမည့်လွှတ်တော်သစ်များတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ပိုမိုပါဝင်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ယင်းရလဒ်က အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဦးဆောင် အခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေရန် ရောင်နီပျိုးလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပါတီစုံ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စုစုပေါင်း ၆၀၃၉ ဦး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်အနက် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေ ၈၀၀ ၀န်းကျင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၅၀ ခန့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
လွှတ်တော်ထဲသို့ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်များ ပိုမိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြင့် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ဘ၀လုံခြုံရေးနှင့် အကာအကွယ် ဖြစ်စေမည့် အဆိုတင်သွင်းမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာနိုင်မည်ဟု အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများက မျှော်လင့်ကြသည်။
ယခင်က အမျိုးသမီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နည်းသည့်အတွက် လွှတ်တော်တွင်း အမျိုးသမီးအရေးကိစ္စများ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း အဆိုတော်တော်များများတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရကြောင်း၊ ရာထူးကြီးကြီး နေရာများတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ တာဝန်ယူရသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရန် အခွင့်အရေး အလွန်နည်းပါးခဲ့ကြောင်း လက်ရှိ အမျိုးသမီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
လက်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက “အခုလာမယ့် လွှတ်တော်မှာ အမျိုးသမီးတွေ များလာတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးလည်း ၀မ်းသာတယ်။ ကြိုလည်းကြိုဆိုရမယ်။ ဒီထက်ပိုများဖို့လည်း အစ်မတို့ ထပ်ကြိုးစားရမယ်။ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ရှေ့တန်းရောက်ဖို့ တကယ့်ကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့နေရာ ရောက်ဖို့ အများကြီး လုပ်ကြရဦးမယ်။ အခက်အခဲတွေကလည်း အများကြီးရှိနေတုန်းလေ” ဟု ရှင်းပြသည်။
လွှတ်တော်ထဲရောက်မည့် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆိုတင်သွင်းမှု များသာမက နိုင်ငံရေးအရ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင်လည်း ပိုမိုပါဝင်လာစေချင်ကြောင်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူက ပြောသည်။
“အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်ထဲမှ မဟုတ်ဘူး ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမို ပါဝင်လာခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့နိုင်ငံ အနာဂတ်ကို ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အမျိုးသမီးတွေက ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့ပါ” ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
သို့သော် အမျိုးသားအများစု ကြီးစိုးသည့် လွှတ်တော်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားမည့် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားထက် ပိုမိုကြိုးစားကြရမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပိုင်းတွင် ပိုမို မြင့်မားလာစေရေး အတွက်ကိုလည်း အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများက လက်တွဲပူးပေါင်းကာ ကူညီရန်အသင့်ရှိကြောင်း ဒေါ်မေစပယ်ဖြူက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံမှုများ ဖယ်ရှားရေး သဘောတူစာချုပ် (CEDAW) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော်လည်း ယင်းစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိနားလည်မှု နည်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်း အမှန်တကယ် လိုက်နာမှု ရှိ မရှိဆိုသည်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ အခြေအနေ ဖြစ်နေသေးသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ၊ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုများ လျော့ကျသွားခြင်း မရှိသည့်အပြင် စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသများတွင်မူ အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်အကြမ်းဖက်မှု အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်များ ပိုမိုများပြားလာပြီး အရေးယူသည့် အပိုင်းတွင်လည်း အားနည်းသည်ကို တွေ့ရကြောင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများက ထောက်ပြကြသည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်ခံရသည့်အခါ၊ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည့်အခါ စာရွက်ပေါ်တွင် မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့တွင် ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်မည့် ဥပဒေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက အကြံပြုသည်။
“တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနဲ့အတူ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကတည်းက Rape case တွေဖြစ်တယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ အမျိုးသမီးတွေဘ၀က လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ တရားဥပဒေစုိုးမိုးမှု မရှိတာတွေပေါ့။ အဲဒီလို လုံခြုံမှု မရှိတဲ့နောက်မှာပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းရည်တွေက တော်တော်ကျလာတယ်။ ဒါတွေကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေအားလုံး ရှေ့တန်းရောက်လာဖို့ အတွက်ဆိုရင် အဘက်ဘက်က ကြိုးစားဖို့လိုတယ်” ဟု ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ နေရာအများဆုံး အနိုင်ရရှိထားသည့် NLD တွင် အမျိုးသမီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၃၃ ဦး အနိုင်ရရှိထားသည့်အပြင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူ တချို့လည်း ပါဝင်နေသောကြောင့် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အသံကျယ်ကျယ် ပြောဆိုပေးနိုင်တော့မည်ဟု အမျိုးသမီးအဖွဲ့များက မျှော်လင့်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၂၇ ဦး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၄၄ ဦး ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၄ ဦး ၀င်ပြိုင်ပြီး ၁၃ ဦး ရွေးချယ်ခံရသည့် အတွက် လက်ရှိလွှတ်တော်တွင် စုစုပေါင်း အမျိုးသမီးအမတ်ဦးရေ ၅၇ ဦးသာရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေသည်။
အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက အစဉ်တစိုက် ပြောဆိုလျက်ရှိသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတွင် အမျိုးသမီးပမာဏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နိုင်ရန်ဟူသော ပမာဏကို ယခုရရှိထားသည့် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်က မပြည့်မီသေးသော်လည်း နောက်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာမည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရှားတောမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းက “ကျမက အမျိုးသမီးထုတွေကို အားပေးချင်တာက နေရာဆိုတာက ရှိပြီးသား၊ အဲဒီနေရာကို တောင်းစရာမလိုဘူး၊ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရင် ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ယုံကြည်စေချင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းသည် အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၆ လသားအရွယ် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားလျက်နှင့် တရွာဝင် တရွာထွက် တအိမ်တက်ဆင်း မဲဆွယ်ခဲ့ကာ ပြိုင်ဘက်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်ကို ၁၅၇၅ မဲ၊ ၇၅၄ မဲနှင့် မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်မနေဘဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိရပ်ရွာ၊ မိမိတိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကို တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကို ယင်းကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းက သက်သေပြလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
“ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရအရ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတခုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား တောင်းဆိုနိုင် ကတည်းကိုက ကျမတို့ အမျိုးသမီးထုတွေသည် လုံးဝ မညံ့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသမီးထုတွေသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းဆိုစရာ မလိုပါဘူး။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာကို ကျမ ရဲရဲကြီး အာမ ခံနိုင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်းက ပြောသည်။
လွှတ်တော်ထဲရောက်ရှိသွားမည့် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များသည် အမျိုးသားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ ယင်းတို့ လုပ်နိုင်သည်ထက် မလျော့ဘဲ အမျိုးသားများ အထင်မသေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး လွှတ်တော်ပြင်ပမှ အမျိုးသမီးများကိုလည်း လက်တွဲ ခေါ်ဆောင်ပေးစေလိုကြောင်း မွန်အမျိုးသမီးပါတီဥက္ကဋ္ဌ မိလယိုင်မွန်က ဆန္ဒပြုသည်။
နိုင်ငံအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရန်အတွက် လွှတ်တော်ပြင်ပရှိ အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများကလည်း လွှတ်တော်တွင်း အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ လက်တွဲညီညီ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့များက တညီတညွတ်တည်း ပြောဆိုကြသည်။
အနိုင်ရရှိထားသည့် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအစရှိသည့် ကဏ္ဍ အသီးသီးနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နေရာများတွင် ပမာဏ မည်မျှပါဝင်လာသည် အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ကိုမူ စောင့်ကြည့်ကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမီးတွေ အတွက် ဖခင်တွေက ပြန်တွေ့ရှိရေး ကြိုးစားနေကြ
ဖားကန့်မြေစာပုံပြိုမှု တောင်အာဖရိကသမ္မတ ဝမ်းနည်းကြောင်း ပေးပို့
လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည့် ဖားကန့်မြေပြိုမှုအတွက် တောင်အာဖရိကသမ္မတ ဂျက်ကော့ဇူးမားက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝမ်းနည်းကြောင်း သတင်းစကား ပေးပို့သည်။
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရာမှ ထွက်ရှိမြေစာများ စုပုံထားရာမှ မီတာ ၆၀ မျှမြင့်သည့် မြေစာတောင်ပုံကြီးဖြစ်နေရာ အောက်ခြေတွင် ယာယီတဲများထိုးနေနေကြသည့် ကျောက်သမားများ အိပ်ပျော်နေစဉ် မြေပြိုမှုဖြစ်ရာ တဲများကို မြေမြုပ်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက်တွင် မြေစာများအောက်က အလောင်းများကို အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေရေးများလုပ်ဆောင်ပြီး ပြည်တွင်းသတင်းများတွင်လည်း ပျောက်ဆုံးနေသူပေါင်း တစ်ရာကျော်ထက်မနည်းရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ပြည်သူများထံ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။"ဟု သမ္မတဇူးမားက သတင်းစကားပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံးက ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့လည်း ကချင်ကျောက်စိမ်းတွင်းက မြေပြိုမှု သဘာဝဘေးနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်သူများတွင် ဖြစ်ပေါ်ခံစားရသည့် အတိုင်းရှိပါတယ်။ တောင်အာဖရိကအစိုးရနဲ့ ပြည်သူတို့ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ မြေပြိုမှုဘေးကြုံခဲ့ရသူများ၊ မိသားစုဆွေမျိုးများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ၊ ပျောက်ဆုံးသူများထံ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြလိုပါတယ်။"ဟု သမ္မတဇူးမားက ပေးပို့ခဲ့သည်။
သာဝတ္ထိမြို့တွင် စွန့်ပစ်ခံ ကလေးများအတွက် အကူအညီလိုအပ်
နေပြည်တော်၊ သာဝတ္ထိမြို့က မိဘမဲ့နဲ့စွန့်ပစ်ခံ ကလေးတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဥယျာဉ်မှာ ကလေးဦးရေ များလာတဲ့အတွက် အကူအညီတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
သာဝတ္ထိမြို့၊ စမတောင်ပေါ်မှာ မိဘမဲ့နဲ့ စွန့်ပစ်ခံ ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်လာတာဟာ အခုဆိုရင် အယောက် ၅၀၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ။
“နို့ဘူးတိုက်အရွယ်ကပဲ အယောက် ၃၀ ကျော်ရှိတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၅၄၀ ကျော်ရှိတယ်။ တစ်ရက်ကို ဆန် ၇ တင်းကျော်ချက်ရတယ်။ ငွေဆိုရင် ၆ သိန်းလောက်ပေါ့။ လေးရက်နေမှ အသားငါး တကြိမ်ကျွေးတယ်။ ကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့ အသီးအရွက်၊ ပဲအမျိုးမျိုးတွေ ကျွေးရတယ်။ အလှူရှင်ရှိရင်တော့ စားရတာပေါ့လေ” လို့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏိန္ဒက မိန့်ပါတယ်။
နို့စို့အရွယ်ကနေ တက္ကသိုလ် တက်တဲ့အထိ ထောက်ပံ့နေတာကြောင့် ပညာသင်စရိတ်နဲ့ စားစရာရိက္ခာ လိုအပ်ချက်ရှိနေတာပါ။
“တက္ကသိုလ်မှာ ၃၆ ယောက်ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်နေရတဲ့သူတွေအတွက် တစ်လကို ၆ သောင်းလောက် ကုန်တယ်။ အထက်တန်းအဆင့်တွေကတော့ ကျူရှင်ခရှိတာပေါ့” လို့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပေးပြီး အချင်းချင်း ထိန်းတဲ့စနစ်နဲ့ ထားတာပါ။
“ကလေးတွေက သူတို့ မိဘမဲ့ ဆိုတာကို သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုမျိုး အများကြီးတွေ့နေတော့ သိပ်တော့ စိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ သူတို့ကိုလည်း စိတ်ဓာတ် အရမ်းကျမသွားအောင် ပြောပေးရတယ်။ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးရတာ ပျော်တယ်။ တခါတလေတော့ မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် ကိုယ်တွေကပဲ မိဘဖြစ်နေတာ” လို့ မူကြိုမှာ တာဝန်ယူပေးရတဲ့ မနှင်းရီဝေက ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီတောင်ပေါ်မှာပဲ မူကြိုကနေ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ ဖွင့်လှစ်ပြီး ပညာသင်ကြားပေးပါတယ်။
ဒီကနေ ဘွဲ့ရသွားသူ ၁၇ ယောက်ရှိပြီး အင်ဂျင်နီယာ ၃ ယောက်ရှိတာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ဗိုလ်သင်တန်း တက်နေသူ ၅ ယောက်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ၉ ယောက်၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်မှာ ၁၂ ယောက်အပါအ၀င် တက္ကသိုလ်တက်နေသူ ၃၆ ယောက် ရှိပါတယ်။
“ပညာရေးကတော့ မသင်မနေရပဲ။ ဘ၀ရဲ့ ထွက်ပေါက်က ဒါပဲ ရှိတာလေ။ ဘယ်မိဘဆီကမှ အမွေရစရာ မရှိဘူး။ အိုင်ကျူ မမီတဲ့ ကလေးတွေ ဆိုရင်လည်း လက်မှု ပညာတွေ သင်ပေးရတာပေါ့။ အရင်ကတော့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနဲ့မှ လက်ခံတယ်။ အခုကတော့ သိပ်ပြီး မစိစစ်တော့ဘူး။ ရောင်းတဲ့အထဲ ပါသွားမှာ စိုးလို့။ ကိုယ့်ဆီရောက်လာအပ်တာပဲ တော်သေးတယ်ဆိုပြီး လက်ခံထားတာ” လို့လည်း ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှု ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေက ပိုများလာတယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ November,28th,2015
( 20 )စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အနိုင်ရ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကျပ်သိန်း ၅၀ လှူမည်
( 19 )Clashes Cease in Wan Hai, but for How Long?
( 18 )ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
( 17 )Smaller parties claim exclusion from political dialogue
( 16 )ဖားကန့်မှာ စက်ယန္တရား အသုံးပြုမှုတွေ ထိန်းချုပ်တော့မည်
( 15 )USDP Official Who Posted Fake Suu Kyi Image Rearrested
( 14 )ဟားခါးမြို့ ယမ်းပေါက်ကွဲမှု အိမ်ရှင်ကို ဖမ်းဆီး
( 13 )Myanmar’s Next Challenge
( 12 )လူထုဒေါ်အမာ နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲ စတင်
( 11 )Government restates invitation for Suu Kyi to visit Japan
( 10 )ရှမ်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ၈၈ အဖွဲ့သွားရောက်ကူညီ
(9)Ceasefire Dialogue off to Rocky Start as Parties Complain of Exclusion
( 8 )ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ လျှော့ချရပ်ဆိုင်း ဖို့ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေး သဘောတူ
(7)Suu Kyi to construct diverse cabinet
(6)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓါတ်ပုံ မဖွယ်မရာလုပ်ဖြန့်ဝေသူ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရ
(5)Aung San Suu Kyi's awkward North Korea problem
(4)အဆင့်မြင့်ပညာရေးသာမကဘဲ ပညာရေးဥပဒေတစ်ခုလုံး ပြင်ဖို့လို
(3)Suu Kyi promises inclusive Cabinet
(2)အစိုးရဖွဲ့ရင် နိုင်ငံ့အကျိုးပြုမယ့် သူတွေပါနိုင်တယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
( 1 )Myanmar elections markedasignificant milestone in world politics
အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ အန်အယ်လ်ဒီ နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြော
ဖားကန့်မြေပြိုမှု ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ရပ်နား
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်တွင်ဖြစ်ပွားသည့် လူပေါင်း ရာကျော် သေဆုံးခဲ့သည့် မြေစာပုံပြိုမှုတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးကြောင်း ဖားကန့်ရဲအရာရှိ ဦးနိုင်ဝင်းက ပြောကြောင်း Associated Press တွင် သတင်းဖော်ပြသည်။
မြေပြိုမှုမှာ ကျောက်စိမ်းတူးရာမှ စွန့်ပစ်မြေစာများ တောင်လိုစုပုံထားရာမှ မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ညပိုင်းက မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ရာ မြေစာပုံတောင်အခြေတွင် နေထိုင်ကြသည့် ကျောက်တူးသမားများ အိပ်စက်နေကြစဉ် မြေပြိုကျခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက အလောင်း ၁၁၃ လောင်းကို ဆွဲထုတ်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပျောက်ဆုံးသူ ၁၀၀ နီးပါးရှိနေသည်။
စွန့်ပစ်မြေစာပုံကို Triple One Jade Mining Company က ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သော်လည်း အခြားကုမ္ပဏီများကလည်း တူးဖော်ရာမှ ထွက်ရှိမြေစာများကို လာရောက်စုပုံကြသည်။
Triple One မှ စွန့်ပစ်မြေစာပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆိုက်မန်နေဂျာ ဦးစိုးက သေဆုံးမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်မရှိကြောင်း၊ ကျောက်တူးသမားများက စွန့်ပစ်မြေစာပုံအောက်ခြေတွင် ၎င်းတို့ သဘောဖြင့် ၎င်းတို့ လာရောက်နေထိုင်နေကြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသို့ ပြောသည်။
"ဒါက ကုမ္ပဏီ အမှားမဟုတ်ပါ။ ကျောက်ရှာအလုပ်သမားတွေက သူတို့ဘာသာ ဒီကိုရောက်လာကြပြီး နေနေကြတာပါ။ မြေစာပုံကနေ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးလေးတွေ လိုက်ရှာရာမှာလည်း နီးနီးနားနားနေပြီး အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ဆိုပြီး နေနေတာပါ။ ဒါအပြင်လည်း ဒီမှာ နေတော့ အိမ်ငှားနေစရာလည်း မလိုဘူးဆိုပြီးတော့ပါ။"ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ကုမ္ပဏီကပင်လုပ်ဆောင်သည့် အခြားစွန့်ပစ်မြေစာပုံတစ်ခုတွင် မြေပြိုကျမှုဖြစ်၍ ၅၀ မှ ၁၀၀ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အကျိုးအမြတ်ကြီးသည့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး လျော့ရဲလျက်ရှိသည့် အခြေအနေကို ထောက်ပြကာ ပြောဆိုခဲ့သည်။
လွိုင်ကထုံ ပွဲတော်ကို ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပ
ပြည်သူချစ်၍ ကမ္ပည်းတင်ရသူ (သို့မဟုတ်) လူထု ဒေါ်အမာ
ပြည်သူချစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ရာပြည့်ပွဲကို မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပကြဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ အခုလာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာ လူထုဒေါ်အမာ နှစ် ၁၀ဝ တင်းတင်း ပြည့်ပါမယ်။ လူထုမျိုးဆက် စာရေးဆရာ ညီပုလေး အပါအဝင် အမေမာရဲ့ တပည့်သားမြေးတွေက ရာပြည့်ပွဲကို ကျင်းပဖို့ လုံးပန်းနေကြတယ်။
ရာပြည့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အမှတ်တရ စာအုပ်တွေ၊ ရာပြည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ ပန်းချီ ဓာတ်ပုံပြပွဲ၊ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ အကြောင်း မြို့မတေးဂီတနဲ့ တွဲဖက်ပြီး စာရေး ဆရာဆူးငှက်က သရုပ်ဖော် တင်ဆက်မှု စတာတွေနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကျင်းပသွားကြမှာ ဖြစ်တယ်။ လူတယောက် အနှစ် ၁၀ဝ တင်းတင်း ပြည့်ရုံနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက ရာပြည့်ပွဲ ကျင်းပပေးရိုး ထုံးစံမရှိဘူး။ ရာပြည့်ပွဲ အကျင်းပခံ ပုဂ္ဂိုလ်က သူရှင်သန်ခဲ့စဉ်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် ဘယ်လောက် တာဝန်ကျေခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ တိုင်းရလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းကတော့ အချိန်တန်ရင် အနှစ်တရာ ပြည့်မယ့် သူချည်း ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အနှစ်တရာပြည့်တိုင်း ကျန်ရစ်သူတွေ က ဂုဏ်ပြုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကိုသာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုကြစမြဲ ဖြစ်တယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဂုဏ်ပြု ထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုတာဟာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ ညီပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြည်သူတွေက ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသေးတယ် မဟုတ်လား။ ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည့်ပွဲကိုလည်း တနိုင်ငံလုံး ဘယ်သူ့စေခိုင်းချက်မှ မပါဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစား ချစ်ခင်ကြသူတွေက အသိစိတ်ဓာတ်ရှိရှိ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်သွားကြတယ်။
လူထုဒေါ်အမာကိုလည်း နှစ် ၁၀ဝ ပြည့် ကျင်းပတယ် ဆိုတာ လူထုကြီးပွားရေး မိသားစု ကွက်ကွက်ကလေးက သိုသိုသိပ်သိပ်ကျင်းပမှာ မဟုတ်ဘဲ လူထုအမေကို ချစ်ခင်လေးစားကြသူတွေ စုပေါင်းပြီး ကျင်းပကြမှာ ဖြစ်တယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က စာပေမိတ်ဆွေတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သတင်းစာဆရာတွေ အရောက်လာကြမှာပါ။
စာပေနယ်နဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်မှာ နှစ် ၁၀ဝ ပြည့်ပေမယ့် လူမသိ သူမသိ ဘာသိဘာသာ ကျော်ဖြတ်သွားကြသူတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ နှောင်းလူတွေက မအဘူး။ နှစ် ၁၀ဝ ပြည့်တယ် ဆိုတိုင်း အားအားယားယား လူတိုင်းကို ဂုဏ်ပြုနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တကယ် ဂုဏ်ပြုဖို့ ထိုက်တန်သူကိုသာ ဂုဏ်ပြုတာပါ။
အမေ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ စာပေဩဇာက ကြီးမားတယ်။ စာပေနယ်မှာ အရှိန်အဝါ ကြီးမားတယ်။ ဘာကြောင့် စာပေဩဇာ ကြီးမားပြီး အရှိန်အဝါကြီးမားရတာလဲ ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ အခါ ရပ်တည်ချက်နဲ့ စေတနာ မှန်လို့ ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ အစိုးရလုပ်သမျှ မှန်တယ် ကောင်းတယ်လို့ မှေးရေးနေရင် အခွင့်အရေးတွေ တန်းစီရတဲ့ ခေတ်မှာ သူ ယုံကြည်ရာကို မထောက်မညှာရေးခဲ့တယ်။ အဖိနှိပ်ခံတွေဘက်က အမြဲ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ မန္တလေးသူပီပီ မြန်မာစကား ဝေါဟာရတွေကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် ရေးသွားနိုင်တယ်။ ခေတ်နဲ့ မျက်ခြည်မပြတ်ခဲ့ဘူး။ သတင်းတွေကို အမြဲ နားစွင့်နေခဲ့တယ်။
စာပေစိစစ်ရေး ဖိနှိပ်မှု အပြင်းထန်ဆုံး ကာလမှာကို အမေ့ ရှေး စကားတွေကို လစဉ်မပြတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်းမှာပါအောင် အားထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ အမေ့ရှေးစကားရဲ့ ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာ သားတယောက် အဝေးရောက်၊ လက်ကျန်သားငယ်က နိုင်ငံတော် စရိတ်နဲ့ သရက်မြို့မှာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီပြီး ခိုအောင်းနေချိန်။ လင်သေသားဆုံး ထားရတဲ့ မုဆိုးမ တယောက်။ အားငယ်လို့ လက်လျှော့မယ်ဆို ဘာ အလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထိုင်ငိုနေရုံသာ ရှိတော့မယ်။
ဒါပေမယ့် လူထုဒေါ်အမာက ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ တပည့်ကောင်းပီသခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ ဘာ အကြောင်းနဲ့မှ အမာကို အပျော့ မဖြစ်စေခဲ့ဘူး။ သူ လုပ်စရာရှိတာတွေကို စေတနာပါပါ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကောင်းဆုံးကိုသာ လုပ်သွားခဲ့တာချည်း ပါပဲ။ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမှုကူညီရေး အသင်းဖြစ်တဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်ကို အတားအဆီးတွေကြားက မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်သွားတာပါပဲ။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း လူထုဒေါ်အမာ မဖြစ်ခင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘဝကတည်းက သပိတ်မှောက် ကျောင်းသူအမာ ဆိုပြီး ရှေ့တန်းက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ လူထုသတင်းစာ ထုတ်ဝေစဉ် ကာလမှာလည်း ပြည်သူ့ဘက်က အစဉ်ရပ်တည်ခဲ့တာပါပဲ။ အစိုးရဘက်က မရပ်တည်ခဲ့လို့ မိသားစု ၃ ယောက်စလုံး ထောင်ချခံ ခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေ ရှိခဲ့တယ်။ သတင်းစာတိုက်ကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ အခွဲခံခဲ့ရတာလည်း ရှိတာပါပဲ။
လူအများစုက ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်ရှိန်သတ်လေ့ ရှိပေမယ့် လူထုဒေါ်အမာကတော့ လောကဓံကို မတုန်လှုပ်ခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အရေးတော်ပုံ ကာလမှာလည်း မြို့လူ ထုသိချင်တဲ့ သတင်းတွေကို ရှစ်လေးလုံးသတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ် လုပ်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်။
လူထုတိုက်က ထွက်ခဲ့တဲ့သူတွေ စာပေနယ်မှာ တူတူတန်တန် နေရာရခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ၁၉၅၅-၁၉၆၅ အတွင်း မန္တလေး တက္ကသိုလ်ထွက် လူငယ်စာရေးဆရာ အများစုကို လူထုသတင်းစာက ကောင်းကောင်း ပျိုးထောင်ပေး နိုင်ခဲ့တယ်။ တင်မိုး၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်)၊ ကြည်အောင်၊ မောင်သာနိုး၊ မောင်သိန်းနိုင်၊ မောင်စောလွင်၊ မောင်ပေါက်စည်၊ မောင်မိုးသူ၊ မောင်ထွန်းဝေစတဲ့သူ တွေက လူထုတိုက်ထွက်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ လူထုသတင်းစာ ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ဖြိုခွဲခံရပြီးနောက်မှာ သတင်းစာထုတ်ဝေမှုကို ရပ်နားခဲ့တယ်။
လူထုကြီးပွားရေး ပုံနှိပ်တိုက်ခေတ်မှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ စာအုပ်စာစောင်တွေကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ပုံနှိပ်တိုက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဝတ္ထုတို ရွှေခေတ် ရောက်ချိန် ဖြစ်တယ်။ လူထုကြီးပွားရေး အရိပ်မှာ ခိုဝင်ခဲ့သူ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ခပ်စိပ်စိပ် ဖော်ပြခံလာရတယ်။
လူထုဒေါ်အမာရဲ့ အငယ်ဆုံးသား စာရေး ဆရာ ညီပုလေးရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ ကျော်ရင်မြင့်၊ ဆူးငှက်၊ ညိုထွန်းလူ၊ ကိုရိုးကွန့်၊ သိုက်ထွန်းသက်၊ ဂျိုဇော်၊ ကျော်စွာထက်၊ ကြည်လင်အေး၊ သင့်နော်စတဲ့ သူတွေ ကလည်း လူထုနဲ့ ထပ်တူ လူထုရဲ့ လူတွေအဖြစ် စာပေနယ်မှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးကာတွန်းဆရာ အော်ပီကျယ်သည်ပင် လူထုတိုက်ထွက်၊ နာမည်ကျော် ဒီဇိုင်နာစိုးဝင်းငြိမ်းနဲ့ ဇော်မောင်တို့ ကလည်း လူထုရဲ့ ရင်သွေးသဖွယ် လူထုဒေါ်အမာရဲ့ အရိပ်မှာ ခိုလှုံခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ရတနာပုံဈေး အပေါ်ထပ်မှာ သားဖြစ်သူ ငြိမ်းချမ်းစိမ်းလန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲလုပ်တော့ ဝှီးချဲကြီးပေါ်ထိုင်လို့ သားဓာတ်ပုံ ဆရာနဲ့ အတူ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို အရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖိအားကြောင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း အပြည့် မပြသနိုင်ခဲ့ဘူး။
အမေမာရဲ့ မွေးနေ့တွေကို တောင်သမန်အင်းစောင်းက တောင်လေးလုံးကျောင်းမှာ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ကျင်းပတယ်။ လူစုံတက်စုံ အတက်ရောက်ဆုံး မွေးနေ့ပွဲလို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ အညာအကြေ တောင်ပေါ်မြေပြန့် မင်းပေါင်းစုံတဲ့ ပွဲ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မျက်လုံးဒေါက်ထောက် အကြည့်ခံရဆုံး မွေးနေ့ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တော်ဘုရားလေး၊ လေထီး ဦးအုန်းမောင်၊ သခင်သိန်းမောင်၊ သခင်အောင်ဖေ၊ မောင်ဝံသ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ လူထုစိန်ဝင်း၊ လင်းယုန်မောင်မောင်၊ မြသန်းတင့်၊ ဒဂုန်တာရာ၊ တင်မိုး၊ ကြည် အောင်၊ မောင်ပေါက်စည်စတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ပညာရှင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ တခုသော မွေးနေ့သဘင်မှာ ၈၈ မျိုးဆက်က ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြအေးတို့ လူထုဒေါ်အမာ မွေးနေ့ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြ သေးတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကိုပါ မရည်ရွယ်ဘဲ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မန္တလေးခရီးစဉ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ လမင်းတရာ ပန်တျာဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်က မမြရင် သီချင်းတွေနဲ့ နှစ်စဉ် ဧည့်ခံကပြတာ အမှတ်ရစရာ ပါပဲ။
၂၀ဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလမှာ လူထုဒေါ်အမာ အသက် ၉၀ ကျော် အရွယ် ရောက်နေပြီ။ သူတို့ အိမ်ရှေ့ ၈၄ လမ်းပေါ်မှာ ဆရာတော်တွေ မေတ္တာသုတ်ရွတ်တော့ တိုက်ဝရန် တာက ထွက်ပြီး လက်အုပ်ချီခဲ့တယ်။ လူထုဒေါ်အမာက တကယ့်အရေးတွေမှာ လူထုနဲ့ ထပ်တူ ရပ်တည်ခဲ့တာချည်း ဖြစ်တယ်။
အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပလဲနံပသင့်အောင်ပေါင်းရင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် သူယုံကြည်ရာကို သေသည် အထိ မဆုတ်မနစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထု ချစ်အောင်နေရင် ပြည်သူလူထုကလည်း ပြန်ချစ်မှာ ဖြစ်တယ်။ လူထုနဲ့ ထပ်တူ လူထုရဲ့လူ ဖြစ်ဖို့သာ လိုပါတယ်။ ။
မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ရှင်းလင်းမယ့် အချိန်ကာလ မသတ်မှတ်ထားလို့ စိတ်ပူစရာဖြစ်
"ကန့်ကွက်လွှာ တင်ဖို့အဆင့်ထိတော့ မစဉ်းစား ထားပါဘူး။ ဦးစိုးညွန့်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ပါထားတဲ့ စာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဖြေရှင်း တောင်းပန်ရင် ဒီအမှုက ဒီမှာပဲ ပြီးသွာမှာပါ" ဟု ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်ညိုညိုသင်း၏ ပါတီဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) အောင်နိုင်ရေးအတွက် ငွေကျပ် ၁၀သိန်း ထောက်ပံ့ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်ဆင့် ညွှန်ကြား၍ ရံပုံငွေအဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာအုပ်ကို ဦးစိုးညွန့်က အောက်တို ဘာလအစပိုင်းတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကို ရည်ညွှန်းကာ သူမကပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ အားပေး ကူညီခဲ့ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်အတွင်း ရွေးချယ်ခံ ရောက်ရှိပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ စာအုပ်တွင် ပါရှိခြင်းကြောင့် အမှုဖွင့်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ဆိုသည်။
အမှုဖွင့်ထားခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်မှ အနိုင်ရ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးထွန်းမြင့်က "စာအုပ်ထုတ်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ဦးစိုးညွန့်ပဲ သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မသိပါဘူး။ စာအုပ်ထုတ်တာလည်း ခိုင်မာတဲ့အချက်အလက် ရှိလို့ရေးတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ ရတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အမှုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ခိုင်မာအောင်ဖွင့်ပါ။ တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပါပဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်းမှ တရားမဲပြုကျင့်မှု တစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး" ဟု ဆိုသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းသန်းနုကမူ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီက ငွေဆယ်သိန်းကို ပါတီရံပုံငွေအဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့သော်လည်း ဒေါ်ညိုညိုသင်းအတွက် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် အခက်ခဲရှိသည့် အမတ်လောင်း သုံးဦးသို့သာ ခွဲဝေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဥက္ကဌ ဦးသုဝေမှသိရှိထားသည်ဟု ပြောသည်။
"အဲဒီတုန်းက၀င်မယ့် ၃ယောက်ကို တစ်ယောက်ကို ၅ သိန်း၊ ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်ကို ၃သိန်းနဲ့ ၂သိန်း ခွဲပေးခဲ့တယ်လို့ ဦးသုဝေကပြောတယ်။ ဦးသုဝေကလည်း ပါတီရံပုံငွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုရေးသား ခဲ့တာကို ဘာမှဖြေရှင်းဖို့ မလိုဘူးလို့တော့ ကျွန်မကို ပြောပြဖူးတယ်" ဟု ဆိုသည်။
ဗဟန်းရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားမှုနှင့်ပက်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပက်သက်သူများကို စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ရဲစခန်းတွင်သာ အမှုကို လက်ခံထားရှိထားသည် ဟုလည်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးခင်မောင်ကြည်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးသားခဲ့သည့် ဦးစိုးညွန့်ကို မဇ္ဈိမက တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာ၊ ဖုန်းပိတ်ထားသည်။
ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပျက်ပြားစေရန်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်ပြားစေရန်ဖြစ်စေ၊ စည်းဝေး ဟောပြောလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ရေးသားဖြန့်ချိခြင်း၊ ပိုစတာများ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ်၊ အခြားနည်းဖြင့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းပါက ငွေဒဏ် တစ်သိန်းသို့မဟုတ်၊ တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၈(ဃ)တွင် ပါရှိသည်။
ရဲအုပ်ဇနီးမောင်နှံကို မူးယစ်တရားခံများက ခေါ်ဆောင်ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွား
မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာခရိုင် သာစည်မြို့နယ်မှာ ရဲအုပ်တဦးနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို မူးယစ်တရားခံတွေက ခေါ်ဆောင်ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ အစိုးရ ပြန်ကြားရေးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
သာစည်မြို့မရဲစခန်းက ရဲအုပ်အာကာ (ခ) အောင်ဇော်ဦးဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က မိတ္ထီလာအကျဉ်းထောင်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ အချုပ်ကျနေတဲ့ စိုင်းပန်နဲ့ ထွန်းဝင်းတို့ကို သာစည်တရားရုံးမှာ အချုပ်ရမန်ထပ်ယူဖို့ ဇနီးစောနှင်းဝေ၊ အဖော် မျိုးသီရိစံတို့နဲ့အတူ သာစည်မြို့ကို ကားနဲ့အလာ ကွမ်းခြံကုန်းရွာအနီးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေက လက်ထိတ်တွေဖြုတ်ပြီး ရဲအရာရှိကို လည်ပင်းညှစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနောက် စိုင်းပန်ရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ အိုက်ခန်းရောက်ရှိလာပြီး မမျိုးသီရိစံကို ကားပေါ်မှ တွန်းချကာ ရဲအရာရှိနဲ့ ဇနီးတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်သို့ ခေါ်ဆောင် ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။
ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကလော၊ အောင်ပန်း၊ ဟဲဟိုးမြို့နယ်တွေမှာ ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေခဲ့ကြရာမှာ ထွန်းဝင်းကို နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်ညက ကလောမြို့နယ်၊ စိုင်းပန်နဲ့ အိုက်ခန်းကို တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ရဲအုပ်နဲ့ ဇနီးတို့ကိုတော့ ဟဲဟိုးမြို့နယ်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တရားခံတွေကို ထပ်မံအမှုဖွင့် အရေးယူထားပြီး ရဲအုပ်အောင်ဇော်ဦးကိုတော့ မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လလယ်ပိုင်းကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်း မူးယစ်တရားခံတဦးကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးအပြန် ရဲအချုပ်ကားပေါ်ကနေ လုယူထွက်ပြေး ခေါ်ဆောင်သွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ November,27th,2015
( 10 )ဘားအံမြို့တွင် နေအိမ် ၃ လုံး မီးလောင်ကျွမ်း
(9)Migrants Processing Thai Chicken Exports Abused, Exploited
( 8 )ရန်ကုန်မှ ဟောင်ကောင်သို့ ပျံသန်းသည့် လေယာဉ် ငှက်နှင့်တိုက်မိပြီး ခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်း
(7)Perception, misperception in the Myanmar peace process
(6)ဖားကန့်မြေပြိုမှု ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး အဆုံးသတ်
(5)Replaying the 'Great Game' in Myanmar?
(4)စစ်ရှိန်လျှော့ရေး မြန်မာအစိုးရနဲ့ SSA မြောက်ပိုင်း သဘောတူညီမှုရရှိ
(3)NLD Feels Weight of Public Expectations
(2)ဖားကန့်မြေပြိုဒဏ်ခံ ရေမဆေးလုပ်သားတွေဘ၀
( 1 )Rohingya calendar men jailed on new charges
စာမရတဲ့ ကလေးကို ဆရာမ ရိုက်နှက်မှု ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြား
"ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့လေ၊ ရေ၊ မြေတွေကို ရှုရှိုက်၊ သောက်သုံး၊ အသုံးပြုခွင့်ဆိုတဲ့ အာမခံချက် တစ်ခုမှမပါဘူး။ ရှမ်းပြည်မှာ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံကြောင့် မွေးကတည်းက မသန့်ရှင်းတဲ့လေကို အခုရှုနေပြီ။ အဲဒီအပြင် အခုဥပဒေမှာ အများကြီး လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်" ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးဝင်းမျိုးသူက ဆိုသည်။
ယင်းဥပဒေကို ၂၀၁၂ခုနှစ် မတ်လ၊ ၃၀ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တိုင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနက နည်းဥပဒေ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ယင်းအပြင် ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များသည် ယေဘူယျ ပြဌာန်းချက်များသာဖြစ်ပြီး တိကျသည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် ကဲ့သို့ အချက်အလက် တိကျစွာ ပြဌာန်းထားခြင်း မရှိသည့်အပြင်၊ ဥပဒေပါ ဖွဲ့စည်းသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်မှု များမှာလည်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေသာ ရှိသည်ဟုလည်း ဝေဖန်ကြသည်။
"ဥပဒေပိုင်းက ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဥပဒေက ပြည်သူ့ပါဝင်မှု၊ ပြည်သူတွေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိန်း ပေးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး တစ်ခုမှမပါဘူး၊ ယေဘူယျဆန်တဲ့ ဥပဒေလို့ ပြောရမယ်။ ဥပဒေထဲမှာ တစ်ချို့လူတွေကို အခွင့်အရေး ပေးထားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေလည်း ပါဝင်နေတာ တွေ့ရတယ်။" ဟု Law Firm မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ ဆောင်ရွက်သူ ဦးအောင်ဇော်လင်းက ဝေဖန်သည်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရာတွင် နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးစသည့် ကဏ္ဍသုံးရပ်လုံးကို ဟန်ချက်ညီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အာမခံချက်များကို လုံးဝထည့်သွင်းထားခြင်းလည်း မရှိကြောင်းလည်း ဦးဝင်းမျိုးသူက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေ အခန်း ၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၆တွင်လည်း ၀န်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း တစ်ခုခုအား၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအကျိုးငှာ ဤဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် လျှော့ပေါ့ခွင့်ပြုနိုင်သည် ဟုလည်း ပါရှိနေသည်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပြန်လည် ပြုပြင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်များမှာလည်း အလွန်နည်းပါးသဖြင့် စီးပွားရေး သမားများအနေဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို ပိုမိုလျစ်လျူရှု လာနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
"ရေဆိုးထုတ်လို့ ပြစ်ဒဏ်က သိန်း ၂၀ပဲပေးရမယ်၊ အဲဒီရေးဆိုးကို သန့်စင်ဖို့ စက်ရုံဆောက်ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂သန်း လောက်ကုန်မယ်၊ အဲဒီတော့ နီးစပ်ရာနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော် ဆိုလည်း သိန်း ၂၀ပဲ ပေးမှာပေါ့" ဟုပြောသည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့က သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့များကို ပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်း တို့သာရှိခဲ့ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကိုမူ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် လာမည့်အစိုးရသစ်က ပျက်ဆီးနေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်များကို မပြုပြင်နိုင်ပါက၊ ရှိနှင့်ပြီးသား ပတ်ဝန်းကျင်များကိုမူ ထိန်းသိမ်းရန် တောင်းဆိုလိုကြောင်းလည်း ဦးဝင်းမျိုးသူက ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က၏ ၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများက သဘာဝဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးစေခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးသုံးသပ်ရန် ဥပဒေပြဌာန်း ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု လျော့ချရေးနှင့် ပြန်လည်စိမ်းလန်း စိုပြေစေရေး အတွက် သုတေသနနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတို့ကို အားပေးခြင်းတို့ အပါအ၀င် အချက် ၁၉ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ထည့်သွင်းအာမခံထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မိသားစုဝင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့
ကျောက်ထုတ်စခန်းမှ ကျောက်တုံးပြိုကျသဖြင့် ၁၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသေဆုံး
ဖားအံမြို့နယ်၊ သံလွင်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ကော့ဂွန်ရွာသစ်ကျေးရွာ၌ တည်ရှိသည့် ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့က ကျောက်တုံးများ ပြိုကျသောကြောင့် ၁၅နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံးကာ ၁၄နှစ်အရွယ် ကျန်တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။
ကျောက်ပြိုကျမှုကြောင့် ထိမှန်ခံရသူနှစ်ဦးမှာ အဆိုပါကျောက်ထုတ်စခန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏ သမီးများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ကျောက်ထုသည့်နေရာတွင် သွားရောက်ကစားရာမှ ကျောက်ပြိုကျခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးသူ မအေးမာ၏ ဖခင် ဦးမြင့်အောင်က ပြောသည်။
“သူတို့က ဦးနဲ့အတူလာလုပ်တာ မနှစ်က။ လာဝိုင်းလုပ်တာပဲ။ အဲဒီနေရာကို သူတို့လာကစားတာ မနက်တိုင်းလိုပဲ။ မိုးက ကျောက်မကျခင် ညထဲက ရွာထားတယ်။ မနက်တော့ ပြိုကျတယ်။ ဒီကျောက်စခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လျှော်ကြေးတွေ ဘာတွေက ဦးက ဘာမှမပြောပါဘူး။ သူတို့တွေက အစစအရာရာ ဝိုင်းကူညီပေးထားတယ်လေး”ဟု ဦးမြင့်အောင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကျောက်တုံးကြီးမပြိုကျခင်ရက်က ထိုအနီးအနားတွင် ကျောက်မိုင်းဖောက်ထားခြင်းရှိသော်လည်း ကျောက်မပြိုဘဲ ညဘက် မိုးရွာအပြီး မနက်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ချိန် ၇နာရီခွဲကျမှသာ ပြိုကျခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျောက်မိုင်းတွင် ကျောက်တူးသည့် ကျောက် လုပ်သားတစ်ဦးမှ ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။
“ကလေးမလေးတွေက အလုပ်သမားတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့မိဘတွေက ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်လို့ သူတို့ဒီမှာလာနေတာ။ အလုပ်လာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိ ကျောက်တွင်းမှာက အလုပ်သမား ၃ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကျနော့် ကျောက်တွင်းကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ ကျောက်တွင်းဖြစ်တယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရဆီကိုတော့ တရားဝင်တင်ထားတယ်”ဟု ကျောက်တွင်းပိုင်ရှင် ဦးနိုင်နိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါကျောက်တွင်းမှာ လမ်းခင်းကျောက်များ ထုတ်လုပ်သည့် ကျောက်ထုတ်စခန်းတွင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရက ခွင့်ပြုထား ခဲ့သလို အခွန်အတွက် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ တနှစ်လျင် ကျပ် ၅သိန်း ပေးဆောင်ရသည်ဟု သူက ပြောသည်။
၎င်းကျောက်ထုတ်ရေးစခန်းတွင် ကျောက်ပြိုကျရန်အတွက် မိုင်းဖောက်ကာ ဖြိုချရသည့်အတွက် မိုင်းဖောက်သည့်အရှိန်ကြောင့် အနီးအနားရှိ လယ်နှင့် တောင်ယာတချို့ပေါ်သို့ကျောက်ခဲများလွင့်ကျခြင်းရှိရာ အနီးအနားရှိ ဒေသခံရွာသူရွာသားများ၏ ဖြတ် သန်းသွားလာမှုအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ဒေသခံများမှတစ်ဆင့် သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေ တိုင်ကြားမူ များလာ
''ကျွန်တော်တို့ အဆင့်ဆင့် တိုင်ကြားမှုတွေလုပ်မှ နမ့်ဆန်မှာကျန်နေတဲ့ မဲရုံ (၅) ရုံကို ပြန်ရေတွက်တော့ ဦးညီစိန် အနိုင်ရပါတယ်။ မူဆယ်၊ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ထဲက ဘယ်မဲရုံလဲတော့မသိဘူး အခုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ဦးညီစိန် နေပြည်တော် ရောက်နေတယ်''ဟု ပါတီရုံးချုပ် တာဝန်ခံ ဦးလှကျော်က မဇ္ဈိမသို့ပြောသည်။ မဲစာရင်း ပြန်လည်ရေတွက်မှုအရ ဦးညီစိန်က (၄၁၀၄၆) မဲ၊ ဦးစိုင်းဆာလူက (၄၀၈၄၇) မဲ ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅) တွင် ဦးညီစိန် အနိုင်ရကြောင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉(ခ) နှင့်အညီ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ကြေညာချက်အရ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒမဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံ ရသူမှာ ဦးညီစိန် ဖြစ်သည်ဟု ပြောင်းလဲ ကြေညာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) တွင် ဦးခွန်ထူး တစ်သီးပုဂ္ဂလ၊ ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်အုန်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဒေါ်နန်းထွေးမှုံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဒေါ်စန်းစန်းထွေး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဦးစိုင်းဆာလူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဦးညီစိန် တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီတို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားသားပါတီသည် ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် (၂၇) ဦး ၀င်ပြိုင်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၄ ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၆ ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လွိုက်ကထုံ တန်ဆောင်တိုင် အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ သောင်ရင်းမြစ်နဘေး ကျင်းပ
တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရေး UPWC နှင့် ရှမ်းမြောက်အဖွဲ့ ညှိနှိုင်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ (UPWC)နှင့် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSPP/SSA) ခေါင်းဆောင်များ အကြား ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန(MPC) နှင့် ဟိုတယ်ရန်ကုန်တို့၌ ယခုလ ၂၃၊ ၂၄ ရက် နေ့များက တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်နှင့် SSPP/SSA တို့အကြား လက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော စစ်ရေး ပဋိပက္ခများ လျှော့ချ၊ ရပ်ဆိုင်းရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု နှစ်ဘက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
MPC ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလှမောင်ရွှေ က“ဆွေးနွေးပွဲက ရလဒ်ကောင်းတွေ ရပါတယ်။ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးမှုတွေ တိုးတက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တွေကို နှစ်ဘက်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တင်ပြီး ၅ ရက်အတွင်း တင်ပြ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ UPWC ဘက်မှ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ များ ဖြစ်သော ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဦးသိန်းဇော် တို့ဦးဆောင်၍ ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး၊ အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်နှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်း အကောင် အထည်ဖော်ရေးဋ္ဌာန (CFNI) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦး တို့ ပါဝင်ကြသည်။
SSPP/SSAA ဘက်မှ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ စဝ်ခေးတိုင်း၊ အတွင်းရေးမှူးများဖြစ်ကြသော စဝ်ခမ်းသီ၊ စဝ်ကျော်လှနှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြ သော စဝ်ခေးမောင်၊ စဝ်ဆုနှင့် စဝ်နော်လိတ် တို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေး သဘောတူညီချက်များကို နှစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
သဘောတူညီချက်များတွင် အစိုးရနှင့် SSPP/SSA တို့အကြား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်က တောင်ကြီးမြို့၌ လက်မှတ် ရေး ထိုး ခဲ့ကြသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူစာချုပ်ပါ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များကို နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းပြီး ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်သွားရန်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် မိုင်းနောင်၊ မိုင်းရှုး ကားလမ်း မြောက်ဘက်အခြမ်းတွင် ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ရန်နှင့် မိုင်းနောင်၊ မိုင်းရှုး ကားလမ်း တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေသော တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများကို ရွှေ့ပြောင်း နေရာ ချထားရန်လည်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။
အလားတူ လက်ရှိ ပဋိပက္ခကြောင့် ယာယီပိတ်ထားရသော စာသင်ကျောင်း ၁၇ ကျောင်း အမြန်ဆုံး ပြန်ဖွင့်ရန်နှင့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများအား နေရပ်ရင်း ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးကို SSPP/SSA နှင့် အစိုးရတို့အကြား နှစ်ဘက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ SSPP/SSA ဗဟိုဌာနချုပ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည် ခေါင်းဆောင်များ ဌာနချုပ်ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိခြင်းမရှိသေး၍ လတ်တလော ဖြေကြားနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း SSPP/SSA ဗဟိုဌာနချုပ် တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
SSPP/SSA နှင့် အစိုးရ တပ်မတော်တို့ အကြားတွင် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်က စပြီး တိုက်ပွဲများ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ၉၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာ၍ ဘေးကင်းရာသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရသည်။
SSPP/SSA အဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်ခြားစောင့် နှင့် ဌာနေ ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ငြင်းဆန်သည့်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လပိုင်းက စတင်ပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် အစိုးရနှင့် SSPP/SSA တို့အကြား ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည် ထောင်စု အဆင့် ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ကြသော်လည်း စာချုပ်ချုပ်ပြီးချိန်မှစ၍ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ လလယ်ပိုင်းအထိ နှစ်ဘက် အကြား တိုက်ပွဲပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း SSPP/SSA က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တပ်မတော်သည် SSPP/SSA နှင့်သာမက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA)၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၌ ပလောင် (တအာင်း) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်တို့နှင့်လည်း လတ်တလော တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ထိုအဖွဲ့များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန် ရှိမရှိ မေးမြန်းမှုကိုမူ အသေးစိပ် မသိရှိရသေးကြောင်း ဦးလှမောင်ရွှေ က ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သက်တမ်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ ပထမအပတ်တွင် ငွေဒင်္ဂါးများကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ငွေစင်ငွေသား ၉၂ ဒသမ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် သွန်းလုပ်ထားပြီး အလေးချိန် ၂ဝ ဂရမ်နှင့် အချင်း ၂၅ မီလီမီတာရှိသည်။ ငွေဒင်္ဂါး၏ အရှေ့ဘက်တွင် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားပြီး အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်အောက်တွင် ၅ဝဝဝ ကျပ်နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်နှစ် ၂ဝ၁၅ ဟု ပါရှိသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်အပေါ် မြင်းခြံမြို့သူမြို့သားများ ပြောစကား
Green Luck ဆီဆိုင်ရှေ့တွင် ချိန်ကိုက်မိုင်း တွေ့ရှိ
ကျောက်မဲမြို့၊ ရပ်ကွက် ၁၊ လားရှိုး-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၉ Green Luck ဆီဆိုင်ရှေ့မှာ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခွဲလောက်က မသင်္ကာဖွယ်ရာ ကတ်ထူပုံး ၁ ပုံးထဲမှာ ချိန်ကိုက်မိုင်းတလုံး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆီဆိုင်အရောင်းတာဝန်ခံ ဦးချစ်ထွေးနိုင်က မသင်္ကာဖွယ် ကတ်ထူပုံးတလုံး တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းပို့တာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ BE တပ်ဖွဲ့တွေ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ High Class ကတ်ထူပုံးအတွင်း အမြင့် ၅ လက်မရှိ PVC ၉ လက်မပိုက်အတွင်း TNT ၂၀၀ ဂရမ်၊ ယမ်းတုံး ၄ တုံးနဲ့ သံတိုသံစတွေကို ည ၁၀ နာရီ ပေါက်ကွဲဖို့ ချိန်ကိုက်ထားတဲ့ Digtal ချိန်ကိုက်နာရီ ၁ လုံး၊ ၉ ဗို့ဓာတ်ခဲ ၂ လုံး၊ ၂ ပေခွဲလောက် ယမ်းကြိုးခွေ ၁ ခွေတို့နဲ့ ပေါက်ကွဲဖို့ တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျောက်မဲမြို့မ ရဲစခန်းက မှုခင်းတာဝန်ခံ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး ဦးသန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီချိန်ကိုက်မိုင်းကို BE တပ်ဖွဲ့က ည ၉ နာရီ ၅၈ မိနစ်အချိန်မှာ Water Bottle စနစ်နဲ့ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယင်းအပြင်အခွန်ထမ်းပြည်သူများအတွက် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုမဖြစ်စေပဲ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ လိုက်နာဆောင် ရွက်နိုင်သည့် အပြင် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် အခွန်စနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာမှ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် ကုမ္ပဏီအခွန် ထမ်းကြီးများ ကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြပ်ပေးနိုင် သည့်စနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အခွန်ထမ်း ကြီးများဆိုင်ရာအခွန်အခွန်ရုံးကို ယခုနှစ် ဧပြီလကရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်၍ အခွန်းစည်းကြပ်မှုကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်ဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ဧပြီးလမှ အောက်တိုဘာလအထိ ပထမ ၆ လပတ်အတွင်း အခွန် ကောက်ခံလျာထားချက် ကျပ် ဘီလျံ(၂၀၂၇.၆၄၂) လျာထားခဲ့ပြီး ကောက်ခံ ရရှိမှုမှာကျပ်ဘီလျံ(၂၃၅၇.၈၀၅)ရရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးအဖွဲ့ကိုယ်စား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
လွိုင်ကထုံ ထိုင်းတန်ဆောင်တိုင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ မြင်ကွင်း
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးနှင့် ရခိုင်အရေးအတွက် ဂျပန်ရောက်တိုင်းရင်းသားများ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
ပြည်တွင်း စစ်ရပ်စဲရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး၊ ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းလိမ် အရေးတို့အတွက် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၆၀ ခန့်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်သူ ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစု(ဂျပန်) ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ထွန်းက နိရဉ္စရာသို့ပြောသည်။
၎င်းဆန္ဒပြပွဲကို ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစု(ဂျပန်)မှ ဦးဆောင်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက် နေ့ လည် ၃ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပထမဆုံး အနေဖြင့် ရခိုင်သဘာဝ သယံဇာတများကို ရခိုင်ပြည်သူများ အကျိုးမခံစားရသည့် အတွက် ကမ္ဘာက သိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆန္ဒပြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ထွန်းက ဆိုသည်။
” ရွှေဂတ်စ်နဲ့ နေပူတောင်စီမံကိန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့  ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့  ဘိုးဘွားပိုင် သံယံဇာတတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရဟာ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ သဘောထားမပါဘဲ ပြည်ပကို ဒေါ်လာ ဘီလီယံ များစွာနဲ့ရောင်းချထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကိုတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေ လုံးဝ မခံစားရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူတွေ ခံစားကြုံတွေ့ နေရတဲ့မတရားမှုတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြသတာပါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
၎င်းပြင် ယင်းရခိုင်သဘာ သယံဇာတ ပစ္စည်းများကို ပြည်ပကို ရောင်းချ၍ ရရှိလာသော ငွေများကိုလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် တစ်စုံတစ်ရာ မသုံးဘဲ ပြည်မဒေသများတွင်သာ သုံးစွဲနေကြောင်း သူက ပြောဆိုသည်။
“ နေပြည်တော် အပါအဝင် ပြည်မ ဒေသတွေမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ၊ လမ်း၊ တံတားတွေ အများကြီး တည်ဆောက် ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ဒေသတွေမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ ၊ လမ်း၊ တံတားတွေ လုံးဝ တည်ဆောက်ပေးခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီ စီမံကိန်းတွေကြောင့် ရခိုင်လူထုတွေ အကျိုး တစ်စုံ တစ်ရာ မခံစားရသလို ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပျက်စီးဆုံရှုံးသွားခဲ့ သလို ရေလုပ်ငန်း တွေရဲ့ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု ဒဏ်တွေကိုလည်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွှေဂတ်စ်နဲ့နေပူတောင် စီမံကိန်းတွေကို ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးရေး အတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုတာပါ” ဟု ၄င်းကဆက်ဆိုသည်။
ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်သူ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးမိုင်ကျော်ဦးကလည်း “ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အစိုးရစစ်တပ်တွေက ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေ၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို မတရားဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်နေမှုတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ လိုချင်ပါတယ်။ အတုအယောင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုပါဘူး” ဟု ပြော သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစု(ဂျပန်) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်သန်းလှိုင်ကလဲ ” ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို မဖျက်ဆီးရေးကို ဒီနေရာကတောင်းဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အသွင်ကူးပြောင်း ရေးကာလမှာလူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပြဿနာ ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလိမ် ဖန်တီးပြီး ပြည်တွင်းမှာ လုံ့ဆော်နေသူတွေကို အရေးယူပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူများသည် ” ရွှေဂတ်စ်စီမံကိန်း- ချက်ချင်းရပ် ” ” နေပူတောင်စီမံကိန်း – ချက်ချင်းရပ် ” ” ရွှေဂတ်စ်နှင့် နေပူတောင်စီမံကိန်း နောက်တက်လာမယ့်အစိုရသစ် လက်ထက် ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သာ- အကောင်အထည်ဖော် ” “တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ အစိုးရ စစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှု- ချက်ချင်းရပ် ” “အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြသာနာဖြစ်ပွား စေရန် ရည်ရွယ်ချက်- ချက်ချင်းရပ် ” ” ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလိမ်ဖန်တီးသူ- အရေးယူပေး ” “‘ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ- အောင်ရမည် ” “ရခိုင့် အရေးတော်ပုံ – အောင်ရမည် ” စသည့် ကြွေးကြော်သံများကို ကြွေးကြော်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
၎င်းဆန္ဒပြပွဲသို့ ရခိုင်အမျိုသားအင်အားစု(ဂျပန်) ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ ဒုဥက္ကဌ ဦးသော်ဇင်ဖြိုး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်သန်းလှိုင်း၊ ဦးမောင်သန်းနှင့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများ အဖွဲ့ ဒုဥက္ကဌဦးမိုင်ကျော်ဦး၊ ဦးမောင်သန်းတို့အပါအဝင် ဂျပန်ရောက် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တိုင်းရင်းသား ၆၀ ကျော်တို့ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားမှာ ညနေ ၄ နာရီခန့် တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
▼ November (965)
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အခြေခံ စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ ဈေ...
ဖားကန့် မြေပြိုမှုတွင် သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်အတွက် ကုမ္ပ...
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အပေါ်နားလည်မှုရှိလာစေဖို့ ပညာပေးဆွေ...
အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပ...
NLD အစိုးရသစ် ကို ဂျပန်အစိုးရက အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးမ...
မြန်မာ့တိုက်ပွဲများအရေး နိုင်ငံတကာ လက်မနှေးရန် ရှမ...
ကျောက်ဖြူတွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှု ဖြစ်...
တန်ဆောင်တိုင် လွိုင်ကထုံ မီးမျှောပွဲတော် ၂ နိုင်ငံ...
တိုင်းပြည်အတွက် ကျရာကဏ္ဍက ကူညီမယ်လို့ ဖိုးလပြည့်ပြော...
ပြည်သူချစ်သော လူထုဒေါ်အမာ နှင့် အနုပညာသည်များ သရုပ်...
ရှမ်း စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် သရုပ်ပြမှုတခု ရန်...
ကချင် ၀န်ကြီးချုပ် လမ်းကြောင်းတွင် ဗုံးကွဲ တစ်ဦးေ...
ယခုဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲ အပေါ် မြင်းခြံ မြို့သူမြို့သားမ...
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေ...
ဦးသန်းရွှေ မြေးနဲ့ တွေ့ဆုံမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတ...
တပ်ချုပ်၏ ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်နှင့် တပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စား...
ဖားကန့် မြေပြိုမှု လူရာကျော် သေဆုံးခဲ့ပေမယ့် ရေမဆေး...
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ အားနည်းချက်များ အစိ...
၈၈ မျိုးဆက် ကရင်ကျောင်းသား ၂ ဦးကို မတရားသင်းပုဒ်မြ...
NLD အစိုးရအဖွဲ့မှာ အာဏာပြမည့် ဝန်ကြီးများ မပါဟု ဒေ...
ချင်းမိုင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး မကြာခင် နို...
တိုင်းရင်းသား ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နဲ့ NLD ပါတီ အပြန်အလှန် တရားစွဲဆိ...
ဖိုးလပြည့်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတ...
လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပ...
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမီးတွေ အတွက် ဖခင်တွေက ပြန်တွေ့ရှိ...
ဖားကန့်မြေစာပုံပြိုမှု တောင်အာဖရိကသမ္မတ ဝမ်းနည်းကြော...
သာဝတ္ထိမြို့တွင် စွန့်ပစ်ခံ ကလေးများအတွက် အကူအညီလို...
အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ အန်အယ်လ်ဒီ နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိဟ...
ဖားကန့်မြေပြိုမှု ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ရပ်...
မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ရှင်းလင်းမယ့် အချိန်ကာလ မသတ်မှတ...
ရဲအုပ်ဇနီးမောင်နှံကို မူးယစ်တရားခံများက ခေါ်ဆောင်ထွ...
စာမရတဲ့ ကလေးကို ဆရာမ ရိုက်နှက်မှု ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မိသားစ...
ကျောက်ထုတ်စခန်းမှ ကျောက်တုံးပြိုကျသဖြင့် ၁၅နှစ်အရွ...
လွိုက်ကထုံ တန်ဆောင်တိုင် အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ သောင်ရင်...
တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရေး UPWC နှင့် ရှမ်းမြောက်အဖွ...
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်အပေါ် မြင်းခြံမြို့သူမြို့သာ...
Green Luck ဆီဆိုင်ရှေ့တွင် ချိန်ကိုက်မိုင်း တွေ့ရှ...
လွိုင်ကထုံ ထိုင်းတန်ဆောင်တိုင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ မြင...
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးနှင့် ရခိုင်အရေးအတွက် ဂျပန်ရော...
အမေရိကန် တစ် ဒေါ်လာ ကျပ်ငွေ ၁၃၀၀ ကျော်အထိ ဈေးမာ
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နိုင်ရေး စိန်ခေါ်မှုများ တွေ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး တကိုယ်တော် ဆ...
ရိုဟင်ဂျာ ပြက္ခဒိန် ထုတ်ဝေမှု နိုင်ငံတော် အကြည်ညို...
တယ်လီနော တာဝါတိုင် ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ ဒေသခံတွေက တေ...
မြန်မာ့ ရေလုပ်ငန်း နောက်အစိုးရလက်ထက် ပြန်လည်ဦးမော့...
ဘင်္ဂါလီများကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ နိုင်ငံသားပေးရန် ပြုလ...
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကထိန်သ...
အာဏာမလွှဲခင် အိမ်စောင့်အစိုးရသာ လုပ်သင့်ဟု ရက္ခိုင့်...
ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဈေးအခြေအနေ
ကြက်သွန်ဈေး တက်မှု အခြေအနေ
တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ထိုးစစ်ဆင်မှုရပ်ဖို့ အမျု...
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ November,26th,2015
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာခေါင်...
စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့သူများအား ကျေးဇူ...
မချောစန္ဒီထွန်း၏ တရားရှင်လွှတ်ပေးရန်နှင့် အာမခံပေးရန...
ချစ်သမီးကို အသရေဖျက်မှုနှင့် တရားစွဲဆိုမှု ပယ်ဖျက်ရေ...
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ဗကသ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုဖြ...
RCSS ကိုယ်စားလှယ် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် သွားရောက်ေ...
တွယ်ရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေအတွက် နားခိုရာ ဘိုးဘွားရိပ်သာ...
စစ်စခန်းတွေ သိမ်းပိုက်ခံရအကြောင်း တရုတ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ...
နှီးနဲ့လုပ်တဲ့ ယွန်းထည် လက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ န...
မိုင်းရှူးမြို့တွင် တရက်ထဲ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းက...
ဘဂါင်္လီများနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အပေါ် စီစစ်မှုကို ကန့် ...
ဘင်္ဂါလီတွေ နိုင်ငံသားစိစစ်တဲ့ကိစ္စ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ရခိ...
ဟားခါးမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် လူ ၆ ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံ...
ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း မြ၀တီခရိုင်အတွင်း လုံခြုံ...
အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ ပြင်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် ဖမ်း...
ရွှေဆံတော် ဘုရားပွဲတော်နဲ့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော် လှည့်လည...
ပြင်သစ်ယာဉ်ကျေးမှုဌာနမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဂီတ...
အမြင့်ကို မှန်းလွန်းလျှင် ချော်ကျတတ်သည်ဟု ကာကွယ်ရေ...
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ ဂဟဲရွာ ကထိန်ပွဲ...
ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ ကျင်းပရန် ရန်ကုန်တွင် စည်းဝေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကာချုပ်တို့ ဒီဇင်ဘာလထဲ တွေ့ဖ...
စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေး ကူညီရန်မေးခွန်း လွှတ်တော် အကြေ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ၀ါရှင်တန်ပိ...